justfreeman: april 2010
.နယူးယောက်အခြေစိုက်လူ့အခွင့်အရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့(HRW)ကချီးမြှင့်သည့် ယခုနှစ်အတွက်ဂုဏ်ပြုဆုရရှိသူစာပေအနုပညာရှင်များထဲတွင်ကာတွန်းဆရာဟန်လေးပါဝင်သည်ဟု သိရသည်။
Hellman/Hammettအမည်ရှိသောဆုအတွက်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီကကာတွန်းဆရာဟန်လေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားကြရာတွင်များစွာဆွေးနွေးစရာမလိုဘဲသဘောတူခဲ့ကြကြောင်းကော်မတီဝင် တဦးဖြစ်သူMarcia Allinaကဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
Hellman/Hammettဆုသည်လူ့အခွင့်အရေးမြှင့်တင်ရန်အတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်လှုပ်ရှားသူများကိုနှစ်စဉ် ချီးမြှင့်သောဆုဖြစ်သည်။လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်နိုင်ခွင့်ကိုအလေးထားသည့်စာရေးဆရာ၊အယ်ဒီတာများပါဝင်သောကော်မတီက၎င်းတို့ထံရောက်ရှိလာသည့်အဆိုပြုလွှာများကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီး ဂုဏ်ပြုဆုရှင်များကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုဆုသည်အမေရိကန်ပြဇာတ်ရေးဆရာမတဦးဖြစ်သူLillianHellmanကြောင့် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ယုံကြည်ချက်အမြင်များကိုဖော်ထုတ်သည့် စာပေအနုပညာရှင်များကိုကူညီရေးအတွက်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်ပြဇာတ်ရေးဆရာမက သေတမ်းစာရေးသားမှာကြားခဲ့သည်။ဆုပေးသည့်အစီအစဉ်ကို၁၉၈၉ခုနှစ်တွင်အစပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်အတွက်ဆုရသူကာတွန်းဆရာကသူ၏ကာတွန်းများကလူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုကို တဘက်တလမ်းကအထောက်ကူပြုကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခံရသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူမိသည်ဟု ပြောပြသည်။
“မြန်မာပြည်သူတွေကလူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေကြတာပါ။လူတိုင်းမှာမွေးရာပါအခွင့်အရေးရှိပါတယ်။အဲဒီ အခွင့်အရေးတွေကိုလူတိုင်းအမြန်ဆုံးရစေချင်ပါတယ်” ဟုကာတွန်းဟန်လေးကပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုသောဆုချီးမြှင့်ခံရခြင်းမှာပထဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း ကာတွန်းဟန်လေးကပြောသည်။ဂုဏ်ပြုဆုနှင့်အတူငွေသားဆုအမေရိကန်ဒေါ်လာ၁၀၀၀ပါဝင်မည်ဟု ဆိုသည်။
ကာတွန်းဟန်လေးသည်၁၉၈၈နောက်ပိုင်းမှစတင်ပြီးပြည်ပရှိစာနယ်ဇင်းများအတွက်ကာတွန်းများ ရေးဆွဲခဲ့သည်။ယခုအခါဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင်ပင်တိုင်ကာတွန်းဆရာအဖြစ်မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး ကာတွန်းများ၊သရုပ်ဖော်ပုံများရေးဆွဲလျက်ရှိသည်။
Hellman/Mammettဆုရှင်ကာတွန်းဟန်လေးသည်ပန်းချီပညာကို၁၉၈၂ခုနှစ်ကရန်ကုန်ပန်းချီပန်းပု အနုပညာကျောင်းတွင်တက်ရောက်သင်ကြားခဲ့သည်။လက်ဦးဆရာများမှာပန်းချီဦးသုခ၊ဦးဘလုံလေး၊ ဦးဘကြည်၊ဦးတင်အေးတို့ ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင်ကွယ်လွန်သူကဗျာဆရာကြီးတင်မိုး၊ဇာဂနာ၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအရေးဆောင်ရွက်သူ ကိုဘိုကြည်၊ဘလော့ဂါနေဘုန်းလတ်စသည့်မြန်မာပြည်သားများလည်းယခင်နှစ်များက Hellman/Mammett ဆုကို ရရှိခဲ့ကြသည်။
Posted by justfreeman at 16:220comments
ရန်ပိုင် Wednesday, April 28, 2010
ပြီးခဲ့သည့်၆၅နှစ်မြောက်တပ်မတော်နေ့အခမ်းအနားတွင်တွေ့ရသည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး(၀ဲအစွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ပြီးလျှင်ဒုတိယ) (ဓာတ်ပုံ-GettyImages)
ယမန်နေ့ကပြုလုပ်သည့်စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသာသနာဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲနှင့်ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲများတွင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း၊ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေး၊ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဉာဏ်ထွန်း၊ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ)ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ဟိန်းနှင့်ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်တပ်တာဝန်မှနုတ်ထွက်လိုက်သောဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်တို့တက်ရောက်သည်များကိုအစိုးရ သတင်းစာများတွင်ဖော်ပြထားသော်လည်းအတွင်းရေးမှူး(၁)ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးကို မတွေ့ရပေ။
အဆိုပါအလှူပွဲများနှင့်မကြာသေးမီကသွားရောက်သည့်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ဖော်ပြသည့် သတင်းမျက်နှာစာများတွင်ထိုသို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးကိုမတွေ့ရသည့်အတွက် ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀န်းတွင်ကောလာဟလအမျိုးမျိုးပြောဆိုနေကြသည်။
အတွင်းရေးမှူး(၁)ကိုဧပြီလအတွင်းဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်၏မြန်မာနိုင်ငံခရီးစဉ်၊ဒုတိယ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး၏ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်နှင့်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်၏ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်သည့်ခရီးစဉ်များနောက်ပိုင်းစစ်အစိုးရ၏သတင်းစာများတွင် မတွေ့ရတော့ပေ။
စင်္ကာပူနိုင်ငံသည်မြန်မာနိုင်ငံမှစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်များ၏ဆေးဝါးကုသရာနေရာတနေရာဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းနေ၀င်း၊ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနှင့်ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းတို့ သွားရောက်ဆေးကုသဖူးသည်။
Posted by justfreeman at 16:080comments
“ဦးဝင်းမြင့်နဲ့သူ့အဖွဲ့ကတော့ဝင်လိမ့်မယ်၊တသီးပုဂ္ဂလပဲဝင်မလား၊ကြံ့ဖွံ့နဲ့ပဲသူ့ဇာတိစစ်ကိုင်းတိုင်း တန့်ဆည်ကပဲဝင်မလားမသိဘူး”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
UMFCCIဥက္ကဋ္ဌနှင့်စစ်အစိုးရနှင့်စီးပွားရေးသမားကြီးများကစုပေါင်းပြီး“အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ” ဟုဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၊ယမန်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့် အမျိုးသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီသည်အဆိုပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖွဲ့စည်းထားသည့် ပါတီဟုထင်မြင်ကြောင်းရန်ကုန်စာနယ်ဇင်းအသိုင်းအ၀န်းတွင်ပြောဆိုနေကြသည်ဟုရန်ကုန်အခြေစိုက် စာနယ်ဇင်းသမားတဦးကပြောပြသည်။
UMFCCIအဖွဲ့ကိုစစ်အစိုးရအာဏာသိမ်းပြီးနောက်၁၉၈၉ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့်နိုင်ငံရေးနှင့်မပတ်သက်ရဟူသောစည်းကမ်းချက်ကိုလည်းယခုအခါ ပယ်ဖျက်ထားသည်။
ပြည်တွင်းအခြေစိုက်စီးပွားရေးပညာရှင်တဦးကလည်းစစ်အစိုးရကရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံဖြိုးရေးအသင်းအပြင်၎င်းတို့နှင့်နီးစပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကိုလည်းငွေအားလူအားဖြင့်အနိုင်ရရှိရန်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စေပြီး လွှတ်တော်တွင်နေရာရယူလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုသည်။
ရတနာပုံအက်ဖ်စီဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစိုင်းဆမ်ထွန်းသည်လည်းမန္တလေးမြို့နယ်တခုမှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟုမန္တလေးမြို့ခံတဦးကပြောသည်။၎င်းသည်Alpineသောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းနှင့် ဖျော်ရည်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦး ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကပဲခူးတိုင်းသာဂရမြို့နယ်ရှိမက်စ်မြန်မာကုမ္ပဏီပိုင်ဘိလပ်မြေစက်ရုံဖွင့်ပွဲတွင်ဦးဇော်ဇော်က ယခုလောလောဆယ်တွင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်မည့်အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း၎င်းတို့၏ မေးမြန်းချက်ကိုဖြေဆိုသွားသည်ဟုစာနယ်ဇင်းသမားတဦးကဆိုသည်။
ဦးဇော်ဇော်မှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပြီး ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာအသားတင်စိုက်ထုတ်၍ဘောလုံးကလပ်အသင်း၈သင်းကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့ သူဖြစ်သည်။ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊စက်ယန္တရားတင်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊မွန်ပြည်နယ်ရှိဘီးလင်းမြို့နယ်တွင် ရော်ဘာခြံဧက၃၀၀၀စိုက်ပျိုးနေပြီး၊မက်စ်ဘိလပ်မြေ(MaxCement)ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများ၊ရန်ကုန်-ပဲခူး ကားလမ်းမပိုင်းတွင်လမ်းအခွန်ကောက်ခံရေးလုပ်ငန်း၊မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေကာ နေပြည်တော်ရှိနိုင်ငံတကာအဆင့်မီအားကစားကွင်း၂ကွင်းဆောက်လုပ်ခွင့်ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
ဦးတေဇသည်ထူးကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထားပြီးသစ်စက်၊ဆန်စက်၊မော်တော်ယာဉ်နှင့်စက်ယန္တရားများ တင်သွင်းခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ရေထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တင်ပို့သည့်လုပ်ငန်း၊ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း၊ အိမ်တွင်းအလှဆင်လုပ်ငန်း၊သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သည့်ကွန်တိန်နာ၊ယန္တရားများဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်သည်။
၎င်းသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပနိုင်ငံများကိုပြေးဆွဲနေသည့်အဲပုဂံ(AirBagan)လေကြောင်းလိုင်းကို တည်ထောင်ထားပြီးမကြာသေးမီကရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးနှစ်ခုကိုလည်းစစ်အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ဦးတေဇကမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်(MNL)ဟုထင်ရှားသည့်ဘောလုံးလောကတွင်လည်း ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကလပ်အသင်းကိုတည်ထောင်ထားပြီးပြည်တွင်းပြည်ပကစားသမားများကိုခေါ်ယူကာ တနှစ်လျှင်လစာကျပ်သိန်းထောင်ချီပေးထားသည်။
ယုဇနဦးဋ္ဌေးမြင့်မှာယခင်ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန်နှင့်နီးစပ်သူ စီးပွားရေးသမားတဦးအဖြစ်လူသိများပြီးယခုအခါတနင်္သာရီတိုင်းတွင်ဆီအုန်းခြံလုပ်ငန်း၊ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 15:560comments
အောင်သက်ဝိုင်း Wednesday, April 28, 2010
.ထောက်လှမ်းရေးခေါင်းဆောင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်၏ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့သော ဆင်ဖြူတော်အမျိုးအနွယ်ဝင်ဆိုသည့်ဆင်၃ကောင်မှာယခုအခါစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များ၏လျစ်လျူရှုခြင်း ခံထားရပြီးပြည်သူများသွားရောက်ကြည့်ရှုမှုနည်းပါးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါဆင်၃ကောင်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရာထူးမှဖယ်ရှားခြင်းမခံရမီစစ်ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့က ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဆင်များကိုရွှေနန်းဆောင်နှင့်ရတနာဆင်ဖြူတော်ဥယျာဉ်ဆောက်လုပ် ထားရှိရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့သောကြောင့်ထိုဆင်များကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်၏ ဆင်များအဖြစ်စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းကသတ်မှတ်ကြကြောင်းအစိုးရအရာရှိအသိုင်းအ၀န်းမှ စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အာဏာကျပြီးနောက်ထိုဆင်ဖြူတော်များကိုစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်များကဂရုစိုက်ခြင်း မရှိတော့သကဲ့သို့အရေးတယူလာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းလည်းမရှိတော့ကြောင်းသစ်တောဝန်ကြီးဌာန၊ရတနာ ဆင်ဖြူတော်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူများကပြောသည်။
“အဘ(ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်)ရှိတုန်းကဆိုဒီဆင်ဖြူတော်တွေကိုတိုင်းမှူးတွေ၊၀န်ကြီးတွေနဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေ နေ့တိုင်းနီးပါးလောက်လာကြည့်ကြ၊ဆင်ဖြူတော်တွေကိုကျန်းမာရေးကအစစားရေး၊နေရေးအဆုံး နေ့စဉ်မှတ်တမ်းလုပ်ပြီးအထက်ကိုတင်ခဲ့ရတယ်”ဟုသစ်တောဝန်ကြီးဌာန၀န်ထမ်းတဦးကဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နှင့်ရင်းနှီးသည့်ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေကဲ့သို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အာဏာရှိစဉ်ကဆင်ဖြူတော်များကိုလစဉ်လာရောက်ကြည့်ရှုအစာကျွေးခြင်းများပြုလုပ် ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်အာဏာမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကစပြီအခုဆို၆နှစ်တိတိရှိပြီ။ဒီဆင်ဖြူတော်တွေကို စစ်ဘက်၊အရပ်ဘက်နဲ့နာမည်ကြီးသူဌေးတွေတယောက်မှလာမကြည့်တော့ဘူး။လာကြည့်ဖို့တောင် ကြောက်နေကြတယ်ထင်တယ်”ဟုရတနာဆင်ဖြူတော်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့်နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းခင်ညွန့်ကိုယ်တိုင်ဆင်ဖြူတော်များကိုနံ့သာရေပက်ဖျန်းနေသည့်မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများကိုလည်းဆင်ဖြူတော်ဥယျာဉ်မှဖြုတ်သိမ်းခဲ့ပြီး၎င်းအမည်ပါဝင်သောဆင်ဖြူတော်ဥယျာဉ် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကမ္ပည်းကျောက်စာတိုင်ကိုလည်းဖြိုချခဲ့သည်ဟုဥယျာဉ်တွင်း ဈေးရောင်းသည့်ပျံကျဈေးသည်များကပြောသည်။
“ဆင်ဖြူတော်မှာမင်းကျင့်တရားဆယ်ပါးနှင့်အညီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောမင်းကောင်းမင်းမြတ်ကြောင့် ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပြီးတိုင်းပြည်၏စည်းစိမ်းဥစ္စာရတနာ၊ရွှေ၊ငွေကျောက်သံ၊ပတ္တမြား၊ဆန်ရေစပါးပေါများမည့် အတိတ်နမိတ်ဖြစ်သည်”ဆိုသောစာသားများကိုလည်းဆင်ဖြူတော်ဥယျာဉ်အတွင်းတွင် ကပ်ထားသည့်အပြင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ဇနီးဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကရတနာဆင်ဖြူတော်များကို သပြေခက်နှင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပြုနေသောဓာတ်ပုံအားပုံကြီးချဲ့ကပ်ထားသည်။
“အခါကြီးရက်ကြီးဆိုရင်တော့လူနည်းနည်းရှိတယ်။သာမန်နေ့တွေဆိုရင်တော့တနေ့ကိုလူဆယ်ယောက်၊အယောက် နှစ်ဆယ်လောက်ပဲလာကြည့်ကြတော့တယ်။၂၀၀၄မတိုင်ခင်ကဆိုရင်တနေ့တနေ့ကို ဆင်ဖြူတော်လာကြည့်တဲ့သူတွေရာနဲ့၊ထောင်နဲ့ချီပြီးကြိတ်ကြိတ်တိုးစည်ကားခဲ့တာ”ဟုဆင်ဖြူတော် ကြည့်ဆောင်အနီး ဈေးရောင်းနေသည့်ဈေးသည်တဦးကပြောသည်။
ယခင်ကရတနာဆင်ဖြူတော်ဥယျာဉ်အနီးတွင်ဈေးရောင်းပွဲတော်များပြုလုပ်ခြင်း၊ရတနာ ဆင်ဖြူတော်ဓာတ်ပုံများနှင့်ပြက္ခဒိန်များထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းအပါအ၀င်ဆင်ဖြူတော်များကို ပြည်သူများအကြားလူသိထင်ရှားဖြစ်စေရန် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ကြိုးစားခဲ့သည်။
ဆင်ဖြူတော်များမှာအထီး၁ကောင်၊အမ၂ကောင်ဖြစ်ပြီးယခုအခါအသက်၁၈နှစ်အရွယ်အုန်းခွံရောင် ဆင်အထီးကိုရာဇဂဟသီရိပစ္စယဂဇရာဇာဘွဲ့အမည်ကိုလည်းကောင်း၊အသက်၃၂နှစ်အရွယ် ပန်းနုရောင်ဆင်မကိုသီင်္ဂီမာလာဘွဲ့အမည်ကိုလည်းကောင်း၊အသက်၁၅နှစ်အရွယ် ပန်းနုရောင်ဆင်မငယ်ကိုရတီမာလာဘွဲ့အမည်ကိုလည်းကောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကအခမ်းအနားဖြင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါဆင်များကိုရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆင်ထီးကို၂၀၀၀ပြည့်နှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၀ရက်နေ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊စေတီပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊အထက်နန်းရာကျေးရွာအနီးမှ လည်းကောင်း၊ဆင်မအကြီးကို၂၀၀၂ခုနှစ်ဧပြီလ၅ရက်နေ့တွင်ရခိုင်ပြည်နယ်၊မောင်းတောမြို့နယ်အတွင်းမှ လည်းကောင်း၊ဆင်မအငယ်ကို၂၀၀၂ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလတွင်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ကိုင်းကြီးကျေးရွာဟောင်း အနီးမှလည်းကောင်း ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့သည်။
ယခုလက်ရှိတွင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကနေပြည်တော်တွင်ဆင်ဖြူတော်ထားရှိနိုင်ရန်ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေစိုက်တပ်ရင်းများကိုတောနင်းရှာဖွေခိုင်းလျက်ရှိပြီးဒေသခံများသည်လည်းဆင်ဖြူတော် ရှာဖွေရေးအတွက် လုပ်အားပေးနေရကြောင်း နေပြည်တော် စစ်ဘက် အသိုင်းအ၀န်းမှ သတင်းရရှိသည်။
ရှေးမြန်မာမင်းများလက်ထက်ကမာတင်္ဂဆင်၊ကေလာသဟထ္ထိဆင်၊ပုဏ္ဍရိကဆင်နှင့် အရုဏဟထ္ထိဆင်ဟူ၍ ဆင်ဖြူတော်၎မျိုးရှိပြီးဗေဒင်ကျမ်းဂန်များတွင်မူခန္ဓာဇလပ်ပွင့်အဆင်းကဲ့သို့ဖြူဖွေးသော သေတဂဇရာဇာဆင်၊ဖွတ်လျော်ပြီးစဖြူဖွေးသောအ၀တ်ပုဆိုးကဲ့သို့အဆင်းရှိသည့်သေတဂဇရာဇာဆင်၊ မျောက်ငိုပွင့်အဆင်းရှိသောသေတဂဇရာဇာဆင်၊ဧကရာဇ်ပွင့်အဆင်းရှိသောသေတဂဇရာဇာဆင်၊ သေတသုဝဏ္ဏဒန္တဆင်၊ဆင်ဖြူရွှေမွေး၊ရွှေကွန်ယက်အုပ်ဆင်ဟူ၍ဆင်ဖြူ၇မျိုးရှိကြောင်းရန်ကုန် နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာအသိုင်းအ၀န်းမှသိရှိရသည်။
“ဘုရင်တွေဘုန်းကြီးလာရင်ဆင်ဖြူတော်ကိုလိုက်ဖမ်းစရာမလိုဘူး။ရှေ့ကိုဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာတယ်။ ဒီစစ်အစိုးရကဘုန်းကြီးတယ်လို့ထင်အောင်ဆင်ဖြူတော်လိုက်ဖမ်းနေတာ။တကယ်ရယ်စရာပဲ”ဟု ရန်ကုန်မြို့နေဗေဒင်ဆရာတဦးကဆိုသည်။
Posted by justfreeman at 15:360comments
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကွတ်ခိုင်မြို့အခြေစိုက်ခြေလျင်တပ်ရင်း-ခလရ၄၅သို့ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုသောခြိမ်းခြောက်စာတစောင်ပို့ခံရသည်ဟုတပ်နှင့်နီးစပ်သူတဦးကပြောသည်။
ဗျူဟာမှူးဗိုလ်မှူးကြီးကြည်ဝင်းအမည်ဖြင့်စာအိတ်တအိတ်ကိုအသက်၁၉နှစ်ခန့်ရှိလူငယ်တဦးက တပ်ရင်းဂိတ်ဝရှိဂိတ်စောင့်အားယခုလ၂၆ရက်နေ့ကလာရောက်ပေးသွားခဲ့သည်။စာထဲတွင်တပ်ဝင်းကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မည်ဟုရေးသားထားသည်ဟုသိရသည်။
“ဂိတ်စောင့်ကလည်းစာလာပေးတဲ့လူကိုတခါမှမမြင်ဖူးဘူးလို့ပြောတယ်။ဗျူဟာမှူးကိုသွားပေးတော့သူလည်းဖတ်ပြီး တပ်ဝင်းတဝင်းလုံးဗုံးခွဲမယ့်သတင်းရလို့လုံခြုံရေးဂရုစိုက်ဖို့မှာထားတယ်လို့ပြောတယ်”ဟု သတင်းရပ်ကွက်ကမဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
ခြိမ်းခြောက်စာလာပို့သူကိုရှာဖွေလျက်ရှိပြီးကွတ်ခိုင်မြို့အထွက်ရှိမူဆယ်၊နမ့်ခမ်းဘက်သို့သွားသည့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင်မြို့တွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသူများကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်တကွအိတ်များကိုပါ ဖွင့်စစ်ဆေးမှုများပိုမိုပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ယခုလ၁၅ရက်နေ့မှစတင်၍ဗုံးပေါက်ကွဲသောသတင်းများမကြာခဏပေါ်ထွက်နေရာအင်္ဂါနေ့က ကယားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့တွင်အသက်၃ဝနှစ်ခန့်သံသယရှိသူတဦးကိုရဲကစစ်ဆေးနေစဉ် ဗုံးဖောက်ခွဲလိုက်သဖြင့်ထိုသူသေဆုံးသွားပြီးရဲ၎ဦးဒဏ်ရာရသွားခဲ့သည်ဟုAFPသတင်းတပုဒ်တွင်ပါရှိသည်။
၂၃ရက်နေ့ကမနက်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့ရှိရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနရှေ့တွင်ဗုံးဟု ထင်ဟပ်စေနိုင်သောအထုပ်တထုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်သွားကာနယ်မြေခံရဲများ ဦးစွာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာန ရှေ့တည့်တည့်ရှိဧရိယာအားပိတ်ဆို့ရှာဖွေခဲ့သည်။
မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့များရောက်ရှိလာပြီးစစ်ဆေးကြည့်သည့်အခါတရုတ်နိုင်ငံထုတ် တိုင်ကပ်နာရီတလုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by justfreeman at 14:490comments
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ဧပြီလ၂၈ ရက်၂၀၁၀ခုနှစ်၁၈နာရီ၄၉မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။မေလ၆ရက်နေ့နောက်ပိုင်းNLDလူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့်အခါပါတီအမည်နှင့် အလံအားဆက်လက်သုံးစွဲပါကကန့်ကွက်သွားမည်ဟုNLDခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။
“တိုင်တာတွေလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံရေးသဘောအရသဘောမတူလို့ကန့်ကွက်သွားမှာပါ။ကျန်တာကို ကော်မရှင်ကလုပ်သွားမယ့်သဘောပါ။ကျနော်တို့ စွက်ဖက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူး”ဟုဦးခင်မောင်ဆွေက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
“၈၈ခုနှစ်ကဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့ကျောင်းသားတွေရဲ့ခွပ်ခေါင်းအမှတ်လက္ခဏာကိုအခုမှ လာပြီးတော့ကာလူမှုရေးတွေအတွက်သုံးမယ်၊ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လက်မခံဘူးဆိုတာကိုအတိအလင်းကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်”ဟုသူကဆက်ပြောသည်။
အခြားသောဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ဝင်တဦးဖြစ်သူဦးဝင်းတင်ကမူ“ပါတီကိုဖျက်သိမ်းတယ်၊ပျက်ပြယ်တယ်လို့ ယူဆလို့ရှိရင်ပါတီနာမည်ဆက်သုံးခွင့်မရှိတော့ဘူး။မရှိလည်းလုပ်လို့ရတာပဲ။တခြား တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ချင်းအမျိုးသားများပါတီတို့ဟာ ဖျက်သိမ်းခံရတာနှစ်ပေါင်း၁၄-၅နှစ်မကတော့ဘူး။ဒီလိုပဲလုပ်နေကြတာ”ဟုပြောသည်။
ပါတီကိုပြန်လည်၍မှတ်ပုံတင်ရေး၊မတင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပြီးခဲ့သည့်လ၂၉ရက်နေ့တွင်NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တိုင်း/ပြည်နယ်ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေးကမှတ်ပုံမတင်ရန် တညီတညွတ်ထဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
Posted by justfreeman at 14:380comments
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ဧပြီလ၂၈ရက်၂၀၁၀ခုနှစ်၁၉ နာရီ၀၂မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတပ်များကပစ်ခတ်လိုက်သောလက်နက်ကြီးများ ထိမှန်မှုကြောင့်အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီကတည်ဆောက်လျက်ရှိသောရေအားလျပ်စစ်စီမံကိန်းလုပ်သား၎ဦး ဒဏ်ရာရသွားသည်။
ပဲခူးတိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်ရှိသောက်ရေခပ်ရေအားလျပ်စစ်စီမံကိန်းသို့နံနက်၁ဝနာရီခွဲခန့်တွင် လက်နက်ကြီးအနည်းဆုံး၂လုံးကျရောက်၍ဝန်ထမ်း၎ဦးဒဏ်ရာရသွားကာတောင်ငူဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံယူနေရသည်။
“ကျနော်တို့စစ်ကြောင်းတွေလှည့်လည်တဲ့အခါထိပ်တိုက်တိုက်ပွဲလား၊ဒါမှမဟုတ်ဆည်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူထုက တားထားတဲ့အပေါ်မှာသွားရောက်ဆုံးမသွန်သင်တဲ့သဘောနဲ့တိုက်တာလားဆိုတာမသိရသေးဘူး။ တိုက်ပွဲကတော့ဖြစ်တာမှန်တယ်”ဟုKNUတွဲဘက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၁)ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက ပြောသည်။
ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွင်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်မှရေကာတာတည်ဆောက်ရေးကျွမ်းကျင်သည့် တရုတ်အလုပ်သမားဦးရေ၇ဝကျော်လည်းရှိနေကြရာတိုက်ပွဲဖြစ်သောကြောင့်အခင်းဖြစ်ရာမှ ရှောင်တိမ်းသွားကြသည်။
တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ချောင်းနှစ်ခွရွာရှိရဲတပ်ရင်း၁၁နှင့်စစ်တောင်းမြစ်အရှေ့ဘက်ကမ်းရှိ အမှတ်၃ရဲစခန်းကိုမေးမြန်းကြည့်ရာတာဝန်ကျအရာရှိများကဖြေကြားရန် ငြင်းဆန်ခဲ့ကြသည်။
ဘိန်းဘုရင်ဟောင်းလော်စစ်ဟန်၏သားဖြစ်သူဦးထွန်းမြင့်နိုင်ပိုင်ဆိုင်သည့်အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီ၏ စီမံကိန်းကဆောက်လုပ်နေသည့်ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆုံဒေသရှိမြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းတွင်လည်း ယခုလ၁၇ရက်နေ့ကဗုံးပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာအင်ဂျင်နီယာတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 14:280comments
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။အပစ်ရပ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး/ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် - ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီကစစ်အစိုးရ၏ရာဇသံဖြစ်သောနယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းရေး အဆိုပြုချက်အားငြင်းဆန်လိုက်ပြီး၊စစ်အစိုးရသည်အပစ်အခတ်ရပ်သဘောတူညီချက်များကို လိုက်နာခြင်းမရှိဟုပြောဆိုလိုက်သည်။
မဇ္ဈိမကလက်ခံရရှိသည့်အဆိုပါပေးစာမိတ္ထူတွင်ယခုလ၇ရက်နေ့ကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့တွင် နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးခဲ့စဉ်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်တောင်းဆိုခဲ့သောနယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးအား ပယ်ချခဲ့ကြောင်းရေးသားထားသည်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်သည်(KNU/KNLA)PeaceCouncilမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ယခုလ၇ရက်နေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းနှင့်အဖွဲ့အားအသွင်ပြောင်းရန်အဆိုပြုခဲ့ကာတုံ့ပြန်ဖြေကြားရမည့် နောက်ဆုံးရက်ကိုယခုလ၂၂ရက်နေ့ဟုသတ်မှတ်ထားခဲ့ကြောင်းပေးစာမိတ္ထူအရသိရသည်။
(KNU/KNLA)PeaceCouncilသည်စစ်အစိုးရအားနှစ်ပေါင်း၆ဝခန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ကရင်လက်နက်ကိုင် KNUအဖွဲ့၏တပ်မဟာ၇မှဖြစ်ပြီး၊၂ဝဝ၇ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်စစ်အစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုကာ KNUမှခွဲထွက်ခဲ့သည်။ယခုအခါဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးမောင်ကစစ်အစိုးရသည်သဘောတူညီချက်များအားလိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်းပြောဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဌေးမောင်က၎င်းတို့သည်စစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအစီအစဉ်မှန်သမျှကိုဆန့်ကျင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီးကရင်ပြည်နယ်အတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးကိုထိန်းသိမ်းလိုကြောင်းပြောသည်။ ထို့နောက်စစ်အစိုးရသည်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များအားချိုးဖောက်ကာစစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်ရွက်ချက်များဆက်လက်၍တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုလည်းစွပ်စွဲလိုက်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ထဲတွင်နှစ်ဖက်လုံးမှစစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောလှုပ်ရှားမှုများအား တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းမပြုလုပ်ရဟုပါရှိသော်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးယူပြီး၃နှစ်အတွင်းကရင်လူမျိုးများအပေါ် မိမိဒေသတွင်နေထိုင်ရရုံအတွက်အိမ်ယာများဆောက်လုပ်ပေးခြင်းနှင့်လမ်းဖောက်လုပ်ပေးခြင်းမှအပ စာချုပ်ပါအချက်များအားစစ်အစိုးရကမလိုက်နာကြောင်းဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးမောင်၏ပေးစာထဲတွင်ဆိုထားသည်။
မော်လမြိုင်ဆွေးနွေးပွဲတွင်စစ်အစိုးရဘက်က(KNU/KNLA)PeaceCouncilအားယခုလ၂၂ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍၎င်းတို့၏အဆိုပြုချက်အားတုံ့ပြန်ဖြေကြားခြင်းမပြုခဲ့လျှင်မတရားအသင်းကြေညာမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်သည်စစ်အင်အားမတိုးချဲ့ရန်၊မည်သည့်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုနှင့်မှမဆက်သွယ်ရန်၊ KNUနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းမပြုရန်၊ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်အဆက်အသွယ်မှန်သမျှဖြတ်တောက်ရန်နှင့် ထိုအဖွဲ့အစည်းများအားမယုံကြည်ရန်သတိပေးခဲ့သေးသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးမောင်ကဖြေကြားရာတွင်“ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေမယ့် စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ဆောင်မှုမျိုးဆိုရင်ဘယ်နာမည်နဲ့ပဲလာလာကျနော်တို့သဘောတူမှာ မဟုတ်ပါဘူး”ဟုတုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့သည်။
(KNU/KNLA)PeaceCouncilအနေနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များကိုလိုက်နာခဲ့သော်လည်း စစ်အစိုးရဘက်ကမူလွန်ခဲ့သော၃နှစ်အတွင်းလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲကရင်လူမျိုးအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲ၍ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ကာထောင်နှင့်ချီ၍သေဆုံးစေမည့်သွေးထိုးမှုမျိုး၊စစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော လှုပ်ရှားမှုမျိုးကိုသာတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
လူအများအပြားသည်စစ်အစိုးရ၏စစ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောအစီအစဉ်များကိုစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ကာမလုံမခြုံ ခံစားလာရသဖြင့်၎င်းတို့လုံခြုံရေးအတွက်(KNU/KNLA)PeaceCouncilထံသို့လာရောက်ပူးပေါင်းရန် စိတ်ကူးလာကြသည်ဟုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
“တကယ်လို့ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ကျနော်တို့တပ်ဖွဲ့အင်အားကောင်းလာတယ်ဆိုရင်တောင်ကျနော်တို့ကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားတို့(စစ်အစိုးရ)ရဲ့စစ်ရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်”ဟုဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးမောင်က ပြောဆိုခဲ့သည်။
KNUနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပြုလုပ်ရန်စစ်အစိုးရ၏ဖိအားပေးမှုနှင့်ပတ်သက်၍တုံ့ပြန်ရာတွင်မူ“ကျနော်တို့ ကရင်အားလုံးဟာမိသားစုတခုလိုပါပဲ။KNUဆိုတဲ့ထီးရိပ်ရဲ့အောက်မှာကရင်လူမျိုးတွေ စည်လုံးညီညွတ်ရေးဟာအရေးအကြီးဆုံးပါ။ကျနော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာစည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းကသာ တနိုင်ငံလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုဦးတည်စေမှာပါ။ကျနော်တို့အဖွဲ့မှာရန်သူမရှိပါဘူး”ဟုဆိုသည်။
KNUသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရန်တိုက်ပွဲဝင်နေသည့်ကရင်တိုင်းရင်းသားများအားကိုယ်စားပြုသော လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး၊မြန်မာနိုင်ငံတွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့လည်း ဖြစ်သည်။သို့သော်တိုးတက်သောဒီမိုကရက်တစ်ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာအစည်းအရုံး-DKBAသည်၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင်KNUမှခွဲထွက်ကာစစ်အစိုးရနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးယူသွားခဲ့သဖြင့်KNUအတွက်အထိနာခဲ့ရသည်။
စစ်အစိုးရသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကတည်းကအပစ်ရပ်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့များအားမြန်မာစစ်တပ်၏ လက်အောက်ခံနယ်ခြားစောင့်တပ်များအဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန်ဖိအားပေးခဲ့ပြီး၊ထိုအင်အားစုများအား ယခုနှစ်ထဲတွင်ကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲ၌ပါဝင်ရန်လည်း တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အင်အားအနည်းငယ်သာရှိသည့်DKBAကစစ်အစိုးရ၏ကမ်းလှမ်းအဆိုပြုချက်ကို သဘောတူညီခဲ့သော်လည်းကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်-KIA၊ဝ'ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်-UWSAနှင့်KNU/KNLA PeaceCouncilစသည့်အဓိကအပစ်ရပ်အဖွဲ့များကပယ်ချခဲ့ကြသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးမောင်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ထံသို့ပေးပို့သောစာတွင်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၌လိုအပ်နေသည်မှာ နောက်ထပ်စစ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုများမဟုတ်ဘဲ၊ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများကိုသာအဓိက လိုအပ်နေကြောင်းနှင့်လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းအလုံးစုံပါဝင်နိုင်သည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်လာစေရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးမောင်ကအကယ်၍၎င်းတို့အနေနှင့်စစ်အစိုးရကမ်းလှမ်းချက်ကိုပယ်ချသဖြင့်မတရားအသင်း ကြေညာခံရလျှင်စစ်ကြေညာသကဲ့သို့ဖြစ်သွားကာစစ်အစိုးရအနေဖြင့်၎င်းတို့တဖွဲ့တည်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံ၏နေရာဒေသပေါင်းစုံမှတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနှင့်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျနော့်စကားကိုမှတ်ထားပါ။ဘယ်သူကနိုင်ငံရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုဖျက်ဆီးနေတာလဲဆိုတာတကမ္ဘာလုံးက သိပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့ကသာစစ်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်”ဟုဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးမောင်က ပြောသည်။
Posted by justfreeman at 14:050comments
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်စစ်အစိုးရကညွှန်ကြားခဲ့သည်ကိုငြင်းဆန်လိုက်ပြီးနောက် စစ်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများမွန်ပြည်သစ်ပါတီကပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
“ဒီလ၂၂ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားအဖြေကကျနော်တို့လက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်ရုံးပိတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကစစ်အစိုးရကအရေးယူမှုပြဿနာဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်လို့၊သဘောကတော့ စစ်ရေးအရ အရေးယူလာရင်ကျနော်တို့လူတွေအထဲမှာခပ်များများကျန်သွားမှာစိုးရိမ်လို့ပါ”ဟုပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်ခြေးမွန်ကပြောသည်။
၁၉၉၅ခုနှစ်စစ်အစိုးရနှင့်အပစ်ရပ်စဲစဉ်နှစ်ဖက်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်ဆက်ဆံရေးရုံးများ ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းသာဖြစ်ပြီးပါတီအနေဖြင့်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ပိုင်ခွင့်မရသဖြင့် ပါတီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထိခိုက်မည်မဟုတ်ကြောင်းမွန်ပြည်သစ်ပါတီဝင်ဟောင်းနိုင်တင်အောင်က ပြောသည်။
“စောစောပိုင်းတော့သစ်လုပ်ငန်းပဲကြီးကြီးမားမားလုပ်တာ။အခုနောက်ပိုင်းသစ်လုပ်ငန်းတောင်အစိုးရက ပါမစ်တွေမချပေးတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ။ရုံးပိတ်လို့ထိခိုက်တာမရှိပါဘူး။အထူးအခွင့်အရေးမှ မရတော့ ဘာမှထိခိုက်တာမရှိပါဘူး”ဟုသူကမဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီရုံးရှိရာရေးမြို့နယ်တွင်စစ်အစိုးရ၏တပ်ရင်း၃ရင်း၊စစ်ဆင်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဌာနချုပ် (စကခ)တခုရှိပြီးဘုရားသုံးဆူတွင်တပ်ရင်း၃ရင်း၊မော်လမြိုင်မြို့တွင်အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့်ထိုမှ မုဒုံမြို့နယ်အထိနအဖတပ်ရင်းအမြောက်အမြားရှိနေသည်။
စစ်ပွဲဖြစ်လာမည်ကိုစိုးရိမ်သဖြင့်ရေးမြို့နယ်တိုးဟပယောက်၊အနီ၊ချဲတိုက်၊ဝေဆင်၊နောင်ဘွဲ့စသည့် ကျေးရွာသား၎ဝဝကျော်သည်ယခု၂၅ရက်နေ့မှစတင်၍ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိခလောက်ခနီ မွန်ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ထွက်ပြေးလာကြကြောင်းသတင်းများထွက်ပေါ်နေသည်။
Posted by justfreeman at 13:340comments
ဆရာဇော်ဂျီ၏ပုဂံဈေးဝတ္ထုတိုတွင်တရုတ်သံတမန်တို့ပုဂံသို့ရောက်၏။ပုဂံနေပြည်တော်သို့ဝင်ရောက်၍ ပုဂံပြည့်ရှင်အားခစား၏။ခစားရင်း…တရုတ်သံတမန်တို့က…အမေးပုစ္ဆာ၂ရပ်အားပုဂံပြည့်ရှင်ထံ တင်လျှောက်ကြ၏။
လှပသောတိုက်ခန်းရှေ့ရှိယောက်ျားကြီးကိုမိန်းမ၁ဝယောက်ဝိုင်းပြီးပြုစုနေကြသည်။သူ့ရှေ့တွင် စားကောင်းသောက်ဖွယ်ပွဲရံကြီးတည်ခင်းထားသည်။သို့ရာတွင်ထိုယောက်ျား၏မျက်နှာပေါ်တွင် လောဘအမူအယာရှိနေဆဲ…။”
၂ဝ၁ဝခုနှစ်မတ်လ၈ရက်နေ့တွင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေလက်မှတ်ထိုး၍ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအားအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ကတရားမျှတမှုကင်းမဲ့သည့် ဥပဒေတရပ်ဟုသတ်မှတ်ပြီး…ဥပဒေအားအသိအမှတ်မပြု…၊လက်မခံ…။ဤအတွက်ဥပဒေတွင် ပါရှိပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်းရက်ပေါင်း၆ဝအတွင်းနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်စစ်အုပ်စု၏ဆွဲခန့်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင်မှတ်ပုံတင်မည်မဟုတ်ဟူ၍၂ဝ၁ဝခုနှစ်မတ်လ၂၉ရက်နေ့တွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။
ဤတွင်အမေးပုစ္ဆာကရှိလာ၏။ရက်ပေါင်း၆ဝလွန်သော်…အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏တည်ရှိမှုက … မည်သို့ရှိမည်နည်း…။စစ်အုပ်စု၏တုံ့ပြန်မှုကမည်သို့ရှိလာမည်နည်း…။စိတ်ဝင်စားစရာပင်….။
တရားအရမူ….စစ်အုပ်စုမှထုတ်ပြန်လိုက်သည့် “နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ”ဟူသည်ကပင် တရားမျှတမှုမရှိ…။ဥပဒေသဘောအရကြောင်းကျိုးညီညွှတ်မှုကင်းမဲ့၍နေသည်။လွတ်လပ်မှု ဆိတ်သုဉ်းနေပြီးတဖက်သတ်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားသည့်ဥပဒေဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့်ပင်…အဖွဲ့ချုပ်မှထိုဥပဒေနှင့်အညီမှတ်ပုံမတင်ခြင်းဖြစ်၏။သို့ဖြစ်၍…ထိုသို့သောဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်လည်းတရားဝင်မှုအားမသက်ရောက်သကဲ့သို့….မှတ်ပုံမတင်ခြင်းသည်လည်း တရားမဝင်…ဟူ၍မယူဆနိုင်…။မူလအခြေခံဥပဒေ‘စံ’ကပင်ပျက်ယွင်းနေသည်ဖြစ်၍…မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မတင်ခြင်းက….တရားဝင်ခြင်း၊မဝင်ခြင်းအားတိုင်းတာ၍မရ…။ပြဋ္ဌာန်း၍မရ…။ဤသို့…တရားအရ သတ်မှတ်၍ရ၏။ထားတော့…။
စစ်အုပ်စုသည်၂၂နှစ်အတွင်းတရားမျှတမှု…။ဥပဒေနှင့်ညီညွှတ်မှု…ဟူသည့်စံတန်ဖိုးများနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့်လူဆောင်ချက်များဟူသည်က…မရှိသလောက်ပင်…။ဤအတွက်…စစ်အုပ်စုက တရားမျှတမှုကင်းမဲ့သည့်“နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ”ကိုပင်စံပေတံအဖြစ်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆံတုတ်တိုက်ပေလိမ့်မည်။လက်တွေ့အရ…စစ်အုပ်စုသည်ဤသို့ပင်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်၏။
ရက်၆ဝလွန်သော်…စစ်အုပ်စုသည်အဖွဲ့ချုပ်၏ရုံးခန်းများအားပိတ်မည်။အဖွဲ့ချုပ်၏အလံ၊ဆိုင်းဘုတ်၊ တံဆိပ်နှင့်အမှတ်အသားများအားသိမ်းမည်။အဖွဲ့ချုပ်၏စာရွက်စာတမ်းနှင့်ဖိုင်တွဲများအားသိမ်းမည်။ထိုသို့ ပြုလုပ်လာလိမ့်မည်ဟုယူဆရ၏။သို့သော်ပြဿနာမရှိ…။ထိုသို့သောစစ်အုပ်စု၏ ပြုကျင့်ဆောင်ရွက်မှုများအားအဖွဲ့ချုပ်သည်တရားဝင်တည်ရှိပါသည်ဟူသည့်၂၂နှစ်တာ ကာလအတွင်း၌လည်းအကြိမ်ကြိမ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပြီးဖြစ်၏။
‘ဤနေရာတွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးမရှိတော့ပါ’ဟူ၍ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီးရွှေဂုံတိုင်ရုံးအားချိတ်ပိတ်ခဲ့သည့် အဖြစ်မျိုးကိုလည်းအဖွဲ့ချုပ်သည်ကြုံခဲ့ဖူးလေပြီ။မဆန်း….။အမှတ်၉၇/ခရွှေဂုံတိုင်တွင်မစုဝေးနိုင်လျှင် … အမှတ်၅၄တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်တွင်တွေ့ဆုံ၍ရမည်။အမှတ်၅၄ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၌မတွေ့ဆုံနိုင်လျှင်….ဦးအောင်ရွှေ၊ဦးတင်ဦးတို့၏နေအိမ်များတွင်တွေ့နိုင်ကြမည်။ အဆုံး၌….ရွှေတိဂုံစေတီ၏ရင်ပြင်ပေါ်၌လည်းတွေ့ဆုံ၍ရ၏။ဆွေးနွေး၍ရ၏။ပြဿနာမရှိ….။အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏နေအိမ်အဆောက်အအုံတိုင်းက…အဖွဲ့ချုပ်၏ရုံးများဖြစ်၏။ဒီမိုကရေစီလိုလားသည့် ပြည်သူတိုင်း၏နေအိမ်အဆောက်အဦးများအားလုံးက…အဖွဲ့ချုပ်၏ရုံးများဖြစ်၏။ထိုနေအိမ်များတွင် တွေ့ဆုံကြမည်။ဆွေးနွေးကြမည်။ဆုံးဖြတ်ကြမည်။
အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ခေါင်းဆောင်မှုအောက်၌တညီတညွတ်တည်း ရှိနေကြ၏ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အဆုံးအဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်အားတသွေးမတိမ်းလက်ခံကြ၏။ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ဦးဆောင်မှုအားမျက်လုံးအိမ်သဖွယ်စောင့်ထိန်း၍ ထားကြ၏။အဖွဲ့ချုပ်အတွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ခေါင်းဆောင်မှုဟူသည်က….စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးထားသည့်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟူသည့်ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးမဟုတ်…။အဖွဲ့ဝင်ထု၏ နှလုံးသွေးကြောအတွင်းစီးမျော၍ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင်တည်ရှိနေသည့်ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးဖြစ်၏။ ဤအတွက်….အဖွဲ့ချုပ်အတွင်းခေါင်းဆောင်မှုပြဿနာဟူ၍ရှိမလာနိုင်….။
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရေး ….
ရက်၆ဝလွန်လျှင်လည်းထိုမူဝါဒသဘောထား၊လမ်းစဉ်များအတိုင်းမြဲမြဲခိုင်ခိုင်ဆုပ်ကိုင်၍ချီတက်ရန်ပင်….။ စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးထားသည့်မူဝါဒသဘောထားကြေညာစာတမ်းများအားစစ်အုပ်စုကသိမ်းယူနိုင်သည်။ ဖျက်ဆီးပစ်၍ရသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီCRPPဟူသည်က…အမှန်စင်စစ်တွင်ဒီမိုကရေစီအရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေးတိုက်ပွဲ၏တပ်ပေါင်းစုပင်ဖြစ်၏။CRPPတွင်ပါဝင်ကြသည့်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ အားလုံးကလည်း…အဖွဲ့ချုပ်၏ ရပ်တည်ချက်နှင့်တထပ်တည်းပင်…။မှတ်ပုံမတင်ကြ။ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ကြ…။
မျက်မှောက်အခြေအနေ၌တရုတ်သံတမန်များမြန်မာပြည်သို့လာရောက်ပြီး…ဆရာဇော်ဂျီ၏ ပုဂံဈေးဝတ္ထုတိုထဲကအတိုင်း….“ရှိ၍မရှိသူနှင့်မရှိ၍ရှိသူ”ဟူသည့်အမေးပုစ္ဆာအားထုတ်ခဲ့လျှင် … မြန်မာပညာကျော်တို့မည်သို့ဖြေကြမည်နည်း…။မည်သည့်ရုပ်ပုံပန်းချီကားချပ်များအားရေးဆွဲ၍ ထိုးဇာတ်ခင်းပြကြမည်နည်း…။
Posted by justfreeman at 13:220comments
မွေးသက္ကရာဇ် ၂၄. ၁ဝ .၁၉၂၂
မွေးချင်း ၆ ယောက်အနက် စတုတ္ထမြောက်။
သားသမီး ၄ ဦးရှိ။(သား၁ဦးနှင့်သမီး၃ဦး)
ပညာအရည်အချင်း မန္တလေးစိန့်ပီတာကျောင်းမှ၁၉၄၇ခုနှစ်တွင်၁ဝတန်းအောင်မြင်ခဲ့။၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၌နိုင်ငံရေးသိပ္ပံအဓိကဖြင့်ပထမနှစ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၁၉၅၁ခုနှစ်တတိယနှစ် အရောက်တွင်ကျောင်းထွက်ခဲ့။ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးပညာကို၁၉၅၉ခုနှစ်တွင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ သင်ကြားအောင်မြင်ခဲ့။
ပါဝင်ခဲ့ဖူးသည့်အဖွဲ့အစည်းများ ၁၉၄၅ခုနှစ်ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတွင်ဆက်သွယ်ရေးတပ်သားအဖြစ် အမေရိကန်တပ်-OSSလက်အောက်တွင်၁၁လကြာအမှုထမ်းခဲ့။၁၉၅၃ခုနှစ်မှ၁၉၈၂ခုနှစ်ထိ ကယားပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းနှင့်ရန်ကုန်တိုင်းတို့တွင်မြို့ပိုင်၊နယ်ပိုင်၊ အရေးပိုင်လုပ်ခဲ့။
ပါတီနှင့်တာဝန်များ ကရင်ပြည်နယ်၊သံတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နာယကအဖွဲ့ဝင် (၁၉၈၉ခုနှစ်မှလက်ရှိ)ကယန်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ(DemocraticOrganizationforKaren)၊ သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်(၁၉၈၉-လက်ရှိ)ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(UNLD)၊ သဘာပတိအဖွဲ့ဝင်(၂ဝဝ၆-လက်ရှိ)ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမဟာမိတ်အဖွဲ့(UNA)
“အခြေခံဥပဒေမှာလိုနေတာဘာလဲဆိုတော့ဥပဒေပြုပိုင်ခွင့်ဇယား၃မျိုးရှိရမယ်။ဗဟိုရယ်၊ဗဟိုနဲ့ပြည်နယ်၊ နောက်ပြည်နယ်သက်သက်အဲလိုဇယားတွေရှိရမယ်။ဗဟိုရော၊ပြည်နယ်ရောဝင်ဆန့်နိုင်မယ့်ညှိုနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ရှိရမယ်။ဥပဒေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့အထူးကော်မရှင်ရှိရမယ်။အဲဒါအရေးကြီးတယ်။ အဲဒါတွေပါမှနိုင်ငံသားအခွင့်အရေး၊တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတိုးတက်လာမှာပေါ့။Constitution ဆိုတာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုခေါ်တာ။မပြည့်စုံရင်အုပ်ချုပ်ရေးဖျက်ဆီးပုံအခြေခံဥပဒေပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ကျနော်ကအတိုက်အခံလည်းမဟုတ်ဘူး။မပြည့်စုံလို့ကိုမထောက်ခံတာ”
“ကျနော်နားလည်ထားတာတော့သူတို့ကြိုက်သလိုသူတို့အာဏာကိုတရားဝင်အောင်လုပ်နေတာ။ကမ္ဘာကို မျက်လှည့်ပြနေတာ။အာဏာရှင်အစိုးရကိုအခြေခံဥပဒေနဲ့တရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာ။ဖြစ်ရမှာက ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်သောအစိုးရသည်ပြည်သူအတွက်ဖြစ်ရမှာ။အခုတော့မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာသူတို့အစိုးရဖြစ်အောင်လုပ်မယ်။သူတို့အကျိုးကိုသူတို့လုပ်မယ့်အစိုးရပဲတက်လာလိမ့်မယ်”
“ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာပြည်သူလူထုကအကြောက်အလန့်မရှိဘဲစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဝင်ရောက်မှ ကောင်းပါတယ်။အခုဟာကပြည်သူလူထုကကြောက်လန့်နေတဲ့အချိန်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြတဲ့လူတွေက လွှတ်တော်အမတ်နေရာအချောင်လိုချင်လို့သာဖြစ်တယ်။၉ဝခုနှစ်တုန်းကပြည်သူတွေရော၊ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရောစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဝင်ကြတယ်။အဲဒီတော့၉ဝခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တော့ တော်တော်ကွာခြားပါတယ်။အခုကတော့ပြည်သူတွေကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဝင်ရမယ်။ အမတ်လောင်းတွေကအမတ်နေရာအချောင်ရဖို့ဝင်ကြမယ်”
“ကျနော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်။ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာRulesofLawsဆိုတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘူး။ လူတဦးတယောက်ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့RulesofManပဲရှိတယ်။အဲဒီတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းRulesofMan နဲ့ပဲသူတို့ကြိုက်သလိုလှည့်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပဲ”
“သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုပထမဆုံးလုပ်ရမယ်။ဒါမှသာအမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ တိုင်းပြည်မှာပေါ်ပေါက်လာမယ်။အဲဒီကနေအဖြေပေါ်လာမယ်။အခုကသူတို့ဒိုင်ယာလော့ခ်မလုပ်ချင်ဘူး။ ဆွေးနွေးဖို့တဖက်ကကမ်းလှမ်းတဲ့လက်ကိုဂရုမစိုက်ဘဲသူတို့တရားဝင်အောင်ကမ္ဘာကိုမျက်လှည့်ပြဖို့ပဲ လုပ်နေတယ်”
“သုံးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကိုတော့မျှော်မှန်းလို့မရတော့ဘူး။အဲတော့စကားပုံတခုရှိတယ်။Diamond cutsdiamond.တဲ့။စိန်သည်စိန်ကိုဖြတ်၏တဲ့။စိန်ဟာမာတယ်။သူ့ကိုဖြတ်နိုင်တဲ့တခြားသတ္ထုမရှိဘူး။စိန်ပဲ ရှိတယ်။အဲဒီတော့ဆိုးတဲ့၊ကြမ်းတဲ့အရာကိုသူ့ထက်ဆိုးတဲ့၊ကြမ်းတဲ့အရာကပဲဖျက်လို့ရမယ်”
“ကျနော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါတိုင်းဆုတောင်းတယ်။ဘာလဲဆိုတော့သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာလည်းနှစ်ခြမ်းကွဲနေတာ ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သတ္တိမရှိဘူး။ကျနော်ဘယ်လိုဆုတောင်းသလဲဆိုတော့အိုဘုရားသခင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တချို့ကိုထူးခြားသောဆန္ဒတွေ၊သတ္တိတွေပေးသနားတော်မူ၍သူတို့သည်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တခု ဖွဲ့စည်းနိုင်အောင်ကူညီတော်မူပါလို့အမြဲဆုတောင်းတယ်”
“ဒီနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းရဲ့ထွက်ပေါက်ဟာသုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးဖြစ်တယ်။အဲဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး၊သူတို့က လက်မခံဘူးဆိုရင်Diamondcutsdiamond.ပဲ။ဒါပဲရှိတယ်။ဒီပုံအတိုင်းဆက်သွားရင်တိုင်းပြည်မှာ ဖိနှိပ်မှုတွေပိုဆိုးလာမယ်။တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိနိုင်ဘူး။နိုင်ငံအတွင်းမှာသွေးထွက်သံယိုမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်”
“မြန်မာပြည်ကိုUN(ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ)မှာအရေးယူမယ်ဆိုရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားကအမြဲကန့်ကွက်နေခဲ့တယ်။ သူတို့ကန့်ကွက်လို့UNကဘာမှအရေးမယူဘဲလိုက်လျောနေခဲ့တယ်။အဲဒါကမှားတယ်။ကမ္ဘာအတွက် မကောင်းဘူး။အခုနျူကလီးယားလက်နက်ကိုသူတို့တိတ်တဆိတ်လုပ်နေပြီ။ရုရှားကပညာရှင်တချို့လွှတ်ပြီး အကူအညီပေးနေတယ်ကြားရတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုလည်းဆက်ဆံလိုက်သေးတယ်။အဲဒီတော့သူတို့ ပြောပြောနေတဲ့ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုးဆိုတာသူတို့မှသူတို့ပဲ။ရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုအားကိုးနေတာ။အဲဒီ နျူကလီးယားလက်နက်ဟာကမ္ဘာကိုချဖို့၊ခြိမ်းခြောက်ဖို့။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကိုလူငယ်တွေရော၊အားလုံးပဲ နားလည်ဖို့ကောင်းတယ်။အဲတော့သူတို့ကနျူလက်နက်ထုတ်လုပ်ပြီးကိုင်ထားနိုင်တဲ့အဆင့်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်သွားလိမ့်မယ်''
“နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုကျနော်မှာချင်တာကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာမပြည့်စုံဘူးဆိုတာကိုနားလည်ကြပါ။ မပြည့်စုံတဲ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူတွေအပေါ်သစ္စာဖောက်ပြီး မဝင်သင့်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်”
Posted by justfreeman at 12:390comments
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်နှင့်အတူဝန်ကြီး၂၂ဦးသည်စစ်ဘက်ရာထူးများကိုယခုလ ၂၆ရက်နေ့မှစတင်၍စွန့်လွှတ်လိုက်ကြသည်။
ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဋ္ဌေးဦး(ကြံ့ဖွံ့အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး)၊ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်မင်း၊စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်တင်နိုင်သိန်း၊အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း၊အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ခင်မောင်မြင့်၊ပြည်ထဲရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ဘုန်းဆွေတို့အဆိုပါ အစုအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည်ဟုမဇ္ဈိမကစုံစမ်းသိရှိထားသည်။
NEJ/၂၇ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
ယခုကဲ့သို့စစ်ရာထူးများမှအနားယူလိုက်ခြင်းသည်ယခုနှစ်အတွင်းကျင်းပရန်ရှိသည့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အရပ်ဝတ်ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းသို့ပြောင်းလဲလိုက်သည့်ခြေလှမ်းတရပ်ဖြစ်ကြောင်းအမည်မဖော်လိုသည့် အစိုးရအရာရှိတဦးကိုကိုးကားပြီးအေအက်ဖ်ပီသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
ယခုလောလောဆယ်ဝန်ကြီးနှင့်ဒု-၀န်ကြီး(၂၃)ဦးခန့်စစ်တပ်မှစစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ကာ သာမန်အရပ်သားအဖြစ်ကူးပြောင်းလိုက်ကြသော်လည်း၎င်းတို့၏အလုပ်တာဝန်များမှာမူ မူလရာထူးများအတိုင်းဆက်လက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊နောက်ထပ်အရပ်ဘက်သို့ကူးပြောင်းမည့်သူများ ရှိသေးကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။
စစ်တပ်မှအနားယူကြသူများထဲတွင်ဗိုလ်ချုပ်ဌေးဦးနှင့်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဘုန်းဆွေတို့လည်းပါဝင်ကြောင်း၊ ယခုအသုတ်သည်ပထမဆုံးအသုတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်စစ်ဘက်မှအရပ်ဘက်ပြောင်းသူများဆက်လက် ထွက်ပေါ်လာဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအစိုးရအရာရှိကပြောကြားသည်။စစ်အစိုးရကမူတရားဝင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပေ။
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူစီးပွားရေးသမားတဦးက“သူတို့ဟာသူတို့အရပ်ဝတ်ပဲပြောင်းပြောင်း၊ဘုန်းကြီးဝတ်ပဲပြောင်းပြောင်းကျနော်တို့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။စားဝတ်နေရေးဘယ်လိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကို တွေးနေရတော့ဘယ်သူကဘာပြောင်းပြောင်းကျနော်တို့ စိတ်မ၀င်စားနိုင်ဘူး”ဟုပြောသည်။
ယခုအရပ်ဝတ်လဲသူများအနက်ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်လည်းပါဝင်ကြောင်းသတင်းထွက်နေသည့်အတွက် ရန်ကုန်စည်ပင်အငြိမ်းစားအရာထမ်းတဦးက“မြို့တော်ဝန်ကအရပ်ဘက်ပြောင်းနေတာအရင်ကပဲ ပြောင်းနေတာပဲ။သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကမြို့တော်စည်ပင်ဆိုတာထက်ကြံ့ဖွံ့ကိုပဲလုပ်နေတာ။လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်လောက်ကပဲလူတိုင်းသတိပြုမိပြီးသား။ကျနော်တို့အနေနဲ့သူအရပ်ဘက်ပြောင်းတာကိုဘယ်လိုမှ မခံစားရဘူး၊မြို့တော်ဝန်နေရာကိုဘယ်သူလာမလဲလည်းစိတ်မ၀င်စားဘူး။ဘယ်သူလာလာစားဖားပဲ လာမှာပဲ”ဟုပြောသည်။
ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်း၌ကျင်းပရန်ရှိသည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ခြင်းမရှိစေရန် ဥပဒေများထုတ်ပြန်ကန့်သတ်ထားသဖြင့်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းကစစ်အစိုးရကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကိုပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြသည်။
အန်အယ်လ်ဒီပါတီအနေဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်မှတ်ပုံတင်မည်ဆိုပါကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပါတီမှ ထုတ်ပစ်ရမည်ဟုရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအရပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့်အန်အယ်လ်ဒီကပါတီအဖြစ် ဆက်လက်မှတ်ပုံမတင်တော့ဘဲရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အောင်ထက်/၂၇ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
“မတတ်သာလို့သာနေပြည်တော်မှာလာနေရတာ။မိဝေး၊ဖဝေးဘယ်သူမှမနေချင်ကြဘူး။၀န်ထမ်း(၁၀၀)မှာ (၉၉)ယောက်ကရန်ကုန်ရုံးတွေမှာပဲနေချင်ကြတယ်။ဒီမှာတယောက်မှမပျော်ကြဘူး”ဟုရုံးအမှတ်(၃၀) စက်မှု(၂)၀န်ထမ်းတဦးကပြောသည်။
ထို့ကြောင့်လစာနည်းဝန်ထမ်းအချို့သည်အပ်ချုပ်ဆိုင်၊မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊မုန့်ပဲသရေစာများ ရောင်းချခြင်းစသည့်မိသားစုတပိုင်တနိုင်အလုပ်များကိုမိမိတို့တိုက်ခန်းများအတွင်းသိုသိပ်လျှို့ဝှက်စွာ ခင်းကျင်းရောင်းချကာဝမ်းရေးအတွက်အပိုဝင်ငွေရှာကြရသည်။
အချို့ဝန်ထမ်းတို့ကဆိုင်ကယ်ဝယ်ယူကာတနေ့(၂,၅၀၀)ကျပ်ဖြင့်အငှားပေးထားခြင်း၊ရုံးချိန်လွတ်ပြင်ပ၌ ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီအငှားလိုက်ခြင်းဖြင့်ဝမ်းရေးဖြေရှင်းနေရသည်ဟုဘောဂသိဒ္ဓိရပ်ကွက်နေ၀န်ထမ်းတို့က ပြောသည်။
“၂၀၀၆ခုနှစ်ရောက်စကဆိုရေမီးအပြည့်အစုံ၊အိမ်ခန်းအသင့်ပေါ့။အခုရန်ကုန်နှုန်းထားအတိုင်းလျှပ်စစ်မီတာခ ကောက်ခံတာ(၆)လကျော်သွားပြီ။မကြာခင်ရေဖိုး၊အိမ်ခန်းလခတွေကောက်လာနိုင်တယ်။နောက်ပြီး နေပြည်တော်သောက်ရေကမသန့်တော့ရေသန့်ဘူးဝယ်သုံးကြရတယ်။စားသောက်ကုန်တွေက ရန်ကုန်ထက်ဈေးမြင့်တယ်။ဈေးသွား၊ကျောင်းသွားလိုင်းကား၊ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီစီးရတယ်။အဲလိုအသုံးစရိတ် ထွက်ငွေတွေများနေတော့လစာနဲ့ဘယ်လောက်တော့မှာလဲ”ဟုဧက(၅၀၀)သာသနာရေးဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ရုံးအမှတ်(၃၅)ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၀န်ထမ်းတဦးကလည်း“၀န်ထမ်းအများစုကျပ်တည်းကြတယ်။ကျမဆို လစာနည်းဝန်ထမ်းလည်းဖြစ်၊အပိုဝင်ငွေလည်းမရှိ၊အိမ်ထောင်သည်လည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ခုလိုရုံးက ပြန်တာနဲ့မုန့်တီအသုပ်ရောင်းနေရတယ်။ဌာနလူကြီးကနားလည်မှုနဲ့ခွင့်ပြုထားပေမယ့်သူတို့ပိတ်ခိုင်းရင် ပိတ်ပေးရမယ်”ဟုပြောသည်။
ရုံးအမှတ်(၂၈)သစ်တောဝန်ထမ်း၏ဇနီးဖြစ်သူက“ကျမကမူကြိုစာပြနေတာအဆင်ပြေတယ်။၀န်ထမ်းတွေက သားသမီးငယ်တွေကိုရုံးခေါ်သွားလို့မသင့်ဘူး။ဒီတော့ကျမတို့မူကြိုကိုကလေးတွေအပ်ခဲ့ရတယ်။ အမျိုးသားရဲ့ဌာနလူကြီးကခုထိတော့မတားမြစ်သေးဘူး”ဟုရှင်းပြသည်။
လက်ရှိတွင်နေပြည်တော်တာဝန်ကျငယ်ရွယ်သူဝန်ထမ်းများသည်ဝန်ထမ်းရရှိလစာငွေနှင့်မိသားစုသုံးစွဲငွေ မညီမျှမှုကြောင့်နုတ်ထွက်ရန်ဝန်မလေးကြသော်လည်းလုပ်သက်ရင့်သက်ကြီးဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်သင့်မသင့်ဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲနေသည်ဟုသိရသည်။
Posted by justfreeman at 15:460comments
မြန်မာစစ်အစိုးရထုတ်ပြန်လိုက်သည့်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေသည်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ပေါ်ထွန်းနိုင်စေမည်မဟုတ်သည့်အတွက်အထူးစိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းဥရောပသမဂ္ဂ(အီးယူ)နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများကပြောကြားလိုက်ကာမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုသက်တမ်းနောက်ထပ်တနှစ် ထပ်တိုးလိုက်သည်။
အီးယူနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများကမြန်မာနိုင်ငံ၌စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုတရပ်ပေါ်ပေါက်ရေး ဦးတည်လုပ်ဆောင်သည်ကိုမမြင်ရကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလွှတ်ပေးရန်အတွက်လည်းထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ထို့အပြင်အီးယူအနေဖြင့်မြန်မာစစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့်ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသွားရန် အဆင်သင့်ရှိနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးအရတိုးတက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်စစ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းအာဏာပိုင်များဖြင့်ဆက်သွယ်စကားပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်အီးယူအထူးကိုယ်စားလှယ်ပီယာရိုဖက်ဆီနို(PieroFassino)ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့စေလွှတ်ရန်အစီအစဉ်ရှိကြောင်းလည်းပြောဆိုကြောင်းလူဇန်ဘတ်ဂ်မှ လာသောသတင်းများတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးအရတိုးတက်မှုများရှိလာနိုင်ရန်၊အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊စစ်အစိုးရအားဆွေးနွေးတိုက်တွန်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အီးယူက မြန်မာနိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်ပီယာရိုဖက်ဆီနို(PieroFassino)ကို၂၀၀၇ခုနှစ်ကတည်းက ခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 15:320comments
မကြာသေးမီကအသစ်ပြောင်းရွှေ့လာသည့်ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူးကြီးအားပေးရန်အတွက်ရဲအုပ်တဦးက ဦးဆောင်ကာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိအနှိပ်ခန်းနှင့်လောင်းကစားဒိုင်များထံမှဆက်ကြေးငွေ ကောက်နေသည်ဟုသိရသည်။
စစ်တွေမြို့မှရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူးကြီးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လာသူရဲမှူးကြီးအောင်ဒိုင်းအတွက်ဂါဝရပြုရန်ဟုဆိုကာ လှိုင်မြို့နယ်အတွင်းတာဝန်ကျရဲအုပ်နိုင်ဦးဆိုသူကယခုလလယ်ပိုင်းလောက်မှစ၍ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ငွေကောက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟုရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူတဦးကပြောသည်။
၎င်းက“ရဲအုပ်နိုင်ဦးကအရင်ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်ရဲ့လက်စွဲပဲ။ဝင်းနိုင်အလုပ်ပြုတ်၊ထောင်ကျတော့ သူ့နေရာရောက်လာတဲ့ရဲမှူးကြီးအောင်နိုင်သူလက်ထက်မှာသူ့ကိုမသုံးဘူး။အခုအောင်နိုင်သူက မန္တလေးပြောင်းရတော့ရခိုင်ဘက်နေအောင်ဒိုင်းဆိုတာအသစ်ရောက်လာတယ်။သူ့ကိုကန်တော့ဖို့၊ဂါရဝ ပြုဖို့ဆိုပြီးအရင်ဝင်းနိုင်ရဲ့လက်စွဲနိုင်ဦးဆိုတာကကမကထလုပ်ပြီးငွေကောက်နေတာ။ မျက်နှာလုပ်တာပေါ့ဗျာ။ရဲမှူးကြီးအတွက်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မြို့နယ်ကရဲတွေလည်းငြိမ်ငြိမ်နေပေးရတာပေါ့”ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ငွေကောက်ခံမှုကိုရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူးကြီးအောင်ဒိုင်းကိုယ်တိုင်သိမသိမသိရှိနိုင်သော်လည်းရဲအုပ် နိုင်ဦးကအခြားရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးနှင့်အတူအနှိပ်ခန်းများမှကျပ်(၅)သိန်းနှုန်း၊နှစ်လုံး၊သုံးလုံး၊ဘောလုံး လောင်းကစားဒိုင်များထံမှကျပ်(၁)သိန်းနှုန်းဖြင့်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းလှည့်လည်ကာငွေကောက်နေသည်ဟု အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်နီးစပ်သူကပြောသည်။
၎င်းက“လစဉ်ကြေးတို့၊လိုင်းကြေးတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲဒါတွေကရဲစခန်းအပိုင်အလိုက်သူ့ဟာနဲ့သူရှိပြီးသား။ အဲဒါကိုလည်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပေးကြပေါ့။အခုဟာကသီးသန့်ကောက်တာ။ရဲမှူးကြီးကို မျက်နှာလုပ်ပြတဲ့သဘောနဲ့ရဲအုပ်နိုင်ဦးကအလိုက်တသိလုပ်ပေးတဲ့ပုံမျိုးပေါ့”ဟုပြောသည်။
အနှိပ်ခန်း၊လောင်းကစားဒိုင်များကရဲစခန်းသို့လစဉ်ကြေးအပြင်အခြားသောငွေကြေးများကို မကြာခဏဆိုသလိုပေးကြရကြောင်း၊သို့သော်တခါတရံစီမံချက်အရဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမှုများရှိလာလျှင် မိမိတို့ငွေပေးထားသည့်ရဲများကလာရောက်တာဝန်ယူဖြေရှင်းခြင်းမျိုးမရှိကြောင်းအင်းစိန်မြို့နယ်အတွင်း အနှိပ်ခန်းလုပ်ကိုင်ဖူးသူတဦးကပြောသည်။
၎င်းက“ပုံမှန်လိုင်းကြေးအပြင်ဟိုရဲစခန်းမှူးကနယ်ပြောင်းရမှာမို့၊ဘယ်သူကပြောင်းတော့မှာမို့ဆိုပြီး ငွေကောက်တာလည်းခဏခဏကြုံရတယ်။ကိုယ်ကတော့အလုပ်မဖြစ်လို့ဆိုပြီးတောင်းတဲ့အတိုင်းမပေးဘဲ လျှော့ယူခိုင်းတာကလွဲလို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဖမ်းတာဆီးတာဖြစ်လာရင်လည်းကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ရှင်း၊ ငွေတောင်းစားထားတဲ့ကောင်တွေကမသိသလိုရှောင်နေကြတာ”ဟုပြောသည်။
Posted by justfreeman at 15:240comments
စိုးမိုး/ ၂၇ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
အခမဲ့မျက်စိစမ်းသပ်ကုသပေးမည်ဟုဆိုကာလာရောက်စမ်းသပ်သူများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ပြီးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဝင်နံပါတ်များဖြင့်မှတ်တမ်းတင် ယူဆောင်နေကြောင်းသိရသည်။
“အခမဲ့မျက်စိစမ်းသပ်ပေးမယ်လို့လိုက်ကြေညာတယ်လေ။အဲဒါသွားတာမြို့နယ်ဆေးရုံမှာပဲ။ဟိုရောက်တော့ ဆေးကုလက်မှတ်လုပ်ရတယ်။အဲဒီစာအုပ်ပေါ်မှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဝင် နံပါတ်ဆိုတာပါလာတာ”ဟုစစ်ကိုင်းတိုင်းပုလဲမြို့နယ်ကျေးရွာဒေသခံတဦးကပြောသည်။
မန္တလေးတိုင်းတောင်သာ၊စစ်ကိုင်းတိုင်းပုလဲ၊ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်မျက်စိအခမဲ့ကုသပေးမှုများခပ်စိပ်စိပ် ပြုလုပ်လာပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်းကမူရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်မှလုပ်ကိုင်သမျှ လမ်းတံတား၊ရေပိုက်လိုင်းဖွင့်ပွဲများတွင်ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင်အရေအတွက်မည်မျှပေးရမည်ဟု သတ်မှတ်တောင်းခံနေသည်။
နအဖစစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်မွေးရပ်ဇာတိများတွင်ယခုကဲ့သို့ အခမဲ့မျက်စိကုသမှုများ၊ဒေသခံပြည်သူလူထုနှင့်တွေ့ဆုံပွဲများပြုလုပ်ကာလူထုကိုကြံ့ဖွံ့အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပြည်သူလူထုသဘောဆန္ဒမပါဘဲဝင်ခိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။
“ပထမမသိဘူး။မျက်စိအလကားစမ်းပေးမယ်ဆိုသွားတာပေါ့။ဟိုရောက်တော့မှသူတို့ရေးမှတ်ပြီးပြန်ပေးတဲ့ စာအုပ်ကလေးကပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဝင်အမှတ်ဆိုမှတ်ထားတာ”ဟုစစ်ကိုင်းမြို့ခံက ဆိုသည်။
ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေအရမြို့နယ်၊ကျေးရွာများတွင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအသက်(၁၈)ပြည့်ပြီး ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရှိသူစာရင်းထုတ်ပြန်ပေးရမည်ဟုပါရှိသော်လည်းယင်းနည်းဥပဒေမထွက်မီကတည်းက လိုက်လံကောက်ယူနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုရန်ကုန်မြို့ခံတို့ကပြောသည်။
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိစာပေစိစစ်ရေးဌာနအကြီးအကဲညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေကိုရာထူးတိုးမြှင့်ကာအခြားသောဌာနသို့ပြောင်းရွှေ့ပေးတော့မှာဖြစ်သည်။
ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေသည်ဒုညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်အဖြစ်ရာထူးတိုးကာပြန်ကြားရေးအောက်အခြားသောဌာနသို့ မကြာမီပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်ပြီးသူ၏နေရာသို့ရေတပ်မှဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမြင့်အောင်ကိုခန့်အပ်မှာ ဖြစ်သည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်စာပေစိစစ်ရေးဌာနတွင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေစာပေစိစစ်ရေး ညွှန်မှူးအသစ်ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သဖြင့်စာမူများအပေါ်အဖြတ်အတောက်ကြမ်းလာမည်ကိုရန်ကုန် စာပေလောကသားများစိုးရိမ်နေသည်။
“စာပေစိစစ်ရေးမှာကညွန်မှူးအပြောင်းအလဲဖြစ်တာနဲ့စာပေအသိုင်းအဝိုင်းမှာအခက်အခဲ ပိုဖြစ်လာတယ်။...အမှန်ကတော့ဘယ်သူမှမရှိလေကောင်းလေပါပဲ”ဟုလစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်းတစောင်၏ဝါရင့်အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
ဗိုလ်မှူးတင့်ဆွေသည်၂ဝဝ၅ခုနှစ်ကစတင်ကာစိစစ်ရေးညွှန်မှူးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးညွှန်/မှူးမဖြစ်မီ မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတိုက်၌လုပ်ကိုင်ခဲ့ကာကိုယ်တိုင်လည်းရဲရင့်တင့်ဆွေဟူသောကလောင်အမည်ဖြင့်စာပေများ ရေးသားခဲ့သူဖြစ်သည်။
သတင်းမီဒီယာသာမကတေးသီချင်းများ၊ဘာသာရေးစာအုပ်စာတမ်းများ၊ကျော်ကြားခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အထုပ္ပတ္တိများ၊နိုင်ငံရေးသမိုင်းများအပါအဝင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချိမှုမတိုင်ခင်ဆင်ဆာဖြတ်တောက်နေသည့် စာပေစိစစ်ရေးအားစာပေ၊ဂီတအနုပညာသည်များက“စာပေကင်ပေတိုင်”ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြသည်။
Posted by justfreeman at 15:010comments
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံစီမံကိန်းအောင်မြင်မှုမရသောဝ'နယ်မြေတွင်ပြည်ပဈေးကွက်ကို အားထားသောသီးနှံများစိုက်ပျိုးရန်လိုသည်ဟုရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန်မှတ်ပုံတင်မည့်ဝတိုင်းရင်းသား ပါတီတခုကပြောဆိုလိုက်သည်။
“ကျနော်တို့နယ်မြေကဘိန်းတခုဖြစ်ထွန်းတယ်။ဘိန်းအစားထိုးသီးနှံတခုမှအောင်မြင်မှုမရသေးဘူး။ ဒါကြောင့်တောင်သူလယ်သမားတွေနာလန်ထူနိုင်အောင်၊ဘဝမြှင့်တင်ပေးနိုင်မှဖြစ်မယ်။ ပြည်ပဈေးကွက်စီးပွားရေးအကျိုးရှိမရှိချိန်ထိုးပြီးတော့နယ်မြေသဘာဝနဲ့ကိုက်ညီတဲ့မျိုးတွေကို ဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အခါမှာပြည်ပတင်ပို့ဖို့ဖြစ်တယ်”ဟုဝ'အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီနာယကဦးဖီးလစ်ဆမ်ကမဇ္ဈိမကိုပြောသည်။
၁၉၉ဝခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှကျန်ခဲ့သော”ဝအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ”အဖြစ်မှ”ဝအမျုိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ”သို့အမည်ပြောင်းလဲကာယခင်ပါတီဝင်၅ဦးနှင့်လူသစ်၁ဝဦးထပ်မံဖြည့်ထားကာ ယခုသီတင်းပတ်အတွင်းနေပြည်တော်သို့သွားရောက်၍မှတ်ပုံတင်မည်ဖြစ်သည်။
ဝ'အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကိုလားရှိုးမြို့၌အခြေစိုက်ပြီးဝ'ပြည်သူအများစုနေထိုင်သည့်ဝ' ပြည်နယ်တွင်မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း၆မြို့နယ်ရှိရာမှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟိုပန်၊တန်ယန်း၊ကျိုင်းတုံစသည့် မြို့နယ်၃နေရာတွင်ဝင်ပြိုင်မည်ဟုသိရသည်။
“ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်၊အစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်တဲ့ပေါ်လစီကိုစောင့်ကြည့်တယ်။ဟိုဘက်ဒီဘက်ကောင်းတဲ့ဟာကို ယူမယ်၊သုံးမယ်၊ကျင့်သုံးမယ်၊အကောင်အထည်ဖော်မယ်။အဲဒါကောင်းမကောင်းကိုဘယ်မှာ ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်နိုင်ငံသား၊ကိုယ့်နယ်မြေဒေသ၊နယ်မြေသဘာဝ၊ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အကျိုးပြုတယ်ဆိုရင်ယူရမှာပေါ့။ကွန်မြူနစ်ဝါဒနဲ့အရင်းရှင်ဝါဒပေါ့ကွာ၊အစွန်းနှစ်ဖက်လွတ်တဲ့ဝါဒပေါ့နော်” ဟုပါတီနာယကဦးဖီးလစ်ဆမ်ကပြောသည်။
ဝ'ပြည်နယ်တွင်စီးပွားရေးအရဖွံ့ဖြိုးသော်လည်းဝ'ပြည်သူလူထုရသင့်ရထိုက်သည့်အခွင့်အရေးများ မရရှိသေးသည့်အပြင်ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးအခန်းကဏ္ဍတွင်များစွာလိုအပ်နေသေးကြောင်း ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင်ဝ'ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီUWSAကလည်းတိုင်းရင်းသားတန်းတူအခွင့်အရေးမရမချင်း၊ မရှိမချင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကိုငြင်းဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ရွေးကောက်ပွဲသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်အပါအဝင်အားလုံးပါဝင်သည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်သင့်ကြောင်းသူကပြောဆိုသည်။
ဝ'အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီကို၁၉၈၉ခုနှစ်၌မှတ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး၁၉၉ဝခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ဟိုပန်၊ တန်ယန်း၂နေရာနှင့်ကျိုင်းတုံမဲဆန္ဒနယ်များတွင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သော်လည်းအမတ်နေရာတနေရာမှမရရှိခဲ့ပေ။ ပါတီဟောင်းမှဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်များမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့သူများရှိ၍လူသစ်များဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
ပါတီအမည်သစ်ပြောင်းလဲ၍ဆက်လက်ရပ်တည်လိုကြောင်းနေပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးသို့ ယခုလ၂၂ရက်နေ့ကလျှောက်ထားရာလက်မခံဘဲပါတီအသစ်အနေဖြင့်လျှောက်နိုင်ကြောင်း အကြောင်းပြန်သည်ဟုပါတီအသစ်ဥက္ကဋ္ဌဦးလုပ်ပေါင်ကပြောသည်။
၁၉၉ဝခုနှစ်တွင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ဖူးသည့်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ၊မြို(ခေါ်)ခမီအမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအဖွဲ့၊လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ၊ပြည်ထောင်စုကရင်အမျိုးသားများ အဖွဲ့ချုပ်တို့သည်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်လိုကြောင်းလျှောက်ထားကြပြီးဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့အထိနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်ထူထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသောစုစုပေါင်း၂၁ပါတီတွင်ကချင်၊ကယန်း၊ ကရင်၂ဖွဲ့၊ပအိုဝ့်၊ချင်း၂ဖွဲ့၊မြိုခေါ်ခမီ၊ရှမ်း၊ပလောင်၊ဝ’၊တအောင်း(ပလောင်)စသည့်တိုင်းရင်းသားပါတီ၁၃ပါတီ ဖြစ်သည်။
Posted by justfreeman at 14:510comments
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံပိတ်ဆို့အရေးယူဒဏ်ခတ်မှုကိုတနှစ်ထပ်တိုးလိုက်ခြင်းအား ကြိုဆိုသော်လည်းအားမရကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
“ဆထက်တံပိုးတိုးပြီးတော့ဖိအားပေးတာလိုချင်တယ်လို့ကျနော်တို့ကပြောနေတဲ့အချိန်မှာတဘက်ကသူတို့ (အာဏာပိုင်)နဲ့သွားဆွေးနွေးမယ်ဆိုတော့ကျနော်တို့အားမလိုအားမရဖြစ်ရတယ်”ဟု ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်ဖြစ်သူဦးဝင်းတင်ကပြောသည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများတိုးတက်မှုမရှိသဖြင့်ပိတ်ဆို့မှုများကိုတနှစ် ထပ်တိုးကြောင်းလူဇင်ဘတ်နိုင်ငံတွင်ယမန်နေ့ကEUနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏အစည်းဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များထဲ၌စစ်အစိုးရနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကိုယ်စားလှယ်တဖွဲ့စေလွှတ်ရေးလည်းပါဝင်သည်။
အနောက်နိုင်ငံများအနေဖြင့်ဗီဒိုအာဏာပိုင်တရုတ်၊ရုရှကဲ့သို့နိုင်ငံကြီးများကိုစည်းရုံးချဉ်းကပ်၍ လုံခြုံရေးကောင်စီမှတဆင့်နိုင်ငံတကာလက်နက်ပိတ်ဆို့မှု၊ပြင်းထန်သည့်သံတမန်ရေးဖိအားပေးမှုများ ဆောင်ရွက်စေလိုသည်ဟုဦးဝင်းတင်ကပြောသည်။
EUက၁၉၉၆ခုနှစ်မှစ၍မြန်မာနိုင်ငံသို့လက်နက်မတင်ပို့ရန်၊စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့်မိသားစုများ၊သူတို့နှင့် နီးစပ်သည့်အင်အားစုများအားပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ခြင်း၊လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူမှလွဲ၍ အခြားအကူအညီများကိုရပ်ဆဲထားခြင်း၊စစ်အစိုးရအရာရှိကြီးများ၏ပြည်ပဘဏ်စာရင်းများကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကန့်သတ်ခြင်းတို့ကိုချမှတ်ထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားတရားဆွဲဆို၍ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည့်တရားသူကြီးများကိုလည်း ပိတ်ဆို့မှုများတွင်ယမန်နှစ်ကထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကိုချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးရန်လည်းEUကတောင်းဆိုထားသည်။
အနောက်နိုင်ငံများ၏ပိတ်ဆို့မှုများအား၂ဝဝ၆ခုမှစ၍ယခုအထိဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားနေသည့်၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီဥက္ကဌဦးအေးလွင်ကမူEU၏ပိတ်ဆို့မှုသည် လက်တွေ့မကျဟုဆိုသည်။
EU၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်နအဖ၏ဥပဒေများအရကျင်းပမည့်ရွေးကောက်ပွဲသည်တရားမျှတမှုရှိမည် မဟုတ်ကြောင်းထည့်သွင်းထားခြင်းသည်(NLDနှင့်အဖျက်သိမ်းခံတိုင်းရင်းသားပါတီများ)၏လိုလားချက်နှင့် မညီသောကြောင့်ယင်းသို့ပြောခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းသူကသုံးသပ်သည်။
ပိတ်ဆို့မှုများသည်စစ်အစိုးရကိုသာမကပြည်သူများကိုလည်းထိခိုက်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများအပေါ် စာနာကြောင်းပြသရာရောက်စေရန်ပိတ်ဆို့မှုများကိုအမြန်ရုတ်သိမ်းပေးသင့်သည်ဟုလည်း ဆက်ပြောသည်။
“ထုနဲ့ထည်နဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုတ်နှံမှုတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲဒါအနုတ်လက္ခဏာပေါ့။ မိသားစုတခုမှာအိမ်ထောင်ဦးစီးကိုနလန်မထူအောင်လုပ်ထားရင်သူ့မိသားစုကိုမထိခိုက်ဘဲနေမလားဗျာ” ဟုသူကပြောသည်။
ဦးဝင်းတင်ကမူပြည်သူများလည်းထိခိုက်သည်ကိုလက်ခံသော်လည်းစစ်အစိုးရထိပ်ပိုင်းအပါအဝင် နီးစပ်သူများကိုပိုထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုသည်။“မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကိုရေနဲ့ပက်ရုံတင်မဟုတ်ဘူးဗျ။ တခါတလေကျတော့လည်းခေါင်မိုးတို့ ထရံတို့ဆွဲခွာရတာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့ဗျာ”ဟုသူကဆိုသည်။
မြန်မာ့အရေးကို နိုင်ငံတကာ၌ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နေသည့်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်အခြေစိုက်ဘားမားကန်ပိန်း (ယူကေ)အဖွဲ့ကြီးကလည်းEUဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပြီးပိတ်ဆို့မှုများကိုရုတ်သိမ်းပါကစစ်အစိုးရအား လွတ်လွတ်လပ်လပ်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခွင့်ပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်သွားမည်ဟုယူဆသည်။
EU၏ထုတ်ပြန်ချက်၌ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့တင်ပြသောမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာကုလအထူးသံမစ္စတာကွင်တားနား၏အစီရင်ခံစာကိုကြိုဆိုပြီးကုလအထူးသံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားသည်။အစီရင်ခံစာအတွင်း၌စစ်အစိုးရ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများအတွက်ကော်မရှင်တခုဖွဲ့၍စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားရန်ကုလသမဂ္ဂကိုအကြံပြုထားသည်။
Posted by justfreeman at 14:340comments
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ပခုက္ကူမြို့တွင်ယမန်နေ့ကလေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအိမ်များပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ရှိခဲ့သလိုလူအသေအပျောက်ရှိခဲ့သည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်။
မကွေးတိုင်းပခုက္ကူမြို့တွင်တင်္နလာနေ့ညနေ၅နာရီခွဲတွင်လေပြင်းတိုက်ခိုက်ရာအိမ်များအမိုးအကာများ လွင့်ထွက်ခြင်း၊သစ်ပင်ပြိုလဲ၍ပိခြင်း၊လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကြိုးများနှင့်တယ်လီဖုန်းကြိုးများ ပြတ်တောက်သွားခဲ့သည်။
“လေကအရမ်းပြင်းတယ်။တဝုန်းဝုန်းနဲ့မိုးရောလေရောဝင်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းတံခါးတွေပိတ် ပြိးအိမ်ထဲမှာပဲနေတယ်။အပြင်ထွက်ကြည့်တော့သစ်ပင်တွေကအမြစ်တွေပါကျွတ်ထွက်တယ်။ တချို့သစ်ပင်တွေဆိုထက်ပိုင်းတွေကျိုးကျတယ်။ဟိုဘက်ခြမ်းကအိမ်ဆိုမိုးထားတဲ့ သွပ်ပြားတွေလှန်ထွက်ကုန်တာ”ဟုဆက်ပြောသည်။
ဒေသခံများခန့်မှန်းချက်အရအိမ်ခြေအနည်းဆုံး၂ဝကျော်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပြီးအမှတ်၁၅ရပ်ကွက်တွင် ပျက်စီးမှုအများဆုံးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။သစ်ပင်ပိ၍ကလေးနှစ်ဦးနှင့်လူကြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနှင့် ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိကြောင်းဆက်သွယ်ရရှိသောဒေသခံများကပြောသည်။
“သစ်ပင်တွေ၊ဓါတ်တိုင်တွေကပြိုတာဒီလမ်းတလမ်းထဲတင်ပြိုတာအများကြီးပဲ။စည်ပင်နဲ့မီးသတ်နဲ့တော့ ခုက်ပြီးရှင်းနေကြတယ်။တမြို့လုံးနီးပါးဆိုတော့သူတို့တရက်တည်းနဲ့တော့ရှင်းလို့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး”ဟု မြို့မဈေးကြီးအနီးနားနေထိုင်သူတဦးကပြောသည်။
တယ်လီဖုန်းလိုင်းအနည်းငယ်သာ ကောင်းမွန်ကျန်ခဲ့သဖြင့် ဆက်သွယ်ရခက်ခဲလှသည်။
ပခုက္ကူမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကပေးပို့သောစာရင်းတရပ်တွင်မူလေပြင်းကြောင့်ခရိုင်အားကစားကွင်း၊ နယ်စပ်စည်ပင်၊အိမ်တွင်းမှုကျောင်း၊အာမခံရုံး၊ကုန်သွယ်လယ်ယာတို့၏အမိုးများ ပျက်စီးသွားသည်ဟုသာပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်မက်လမှစတင်ကာမေလ၂ဝရက်နေ့အတွင်းမိုးကြိုးမုန်းတိုင်းနှင့်လေပြင်းမုန်တိုင်းများ ကျလိမ့်မည်ဟုမိုးလေဝသဇလဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလွင်ကယခုလအစပိုင်းကသတိပေး ပြောဆိုခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 14:160comments
တနင်္လာနေ့၊ဧပြီလ၂၆ ရက်၂၀၁၀ခုနှစ်၁၈နာရီ၄၀မိနစ် .
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်လာမည့်လ၇ရက်နေ့မှစတင်၍နိုင်ငံရေးလုပ် ငန်းများရပ်ဆိုင်းကာလူမှုရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောသည်။
“မေလ၇ရက်နေ့ကစပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။တတ်နိုင်တဲ့လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်''ဟုNLDပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်နှင့်CECအဖွဲ့ဝင်ဦးအုန်းကြိုင်ကမဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟန်းမြို့နယ် NLD ရုံးချုပ်၌ ယနေ့ကျင်းပသည့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ CEC အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီး HIV/ AIDS ဝေဒနာသည်များ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး၊ နာဂစ်သင့် ဒုက္ခသည်များအား သောက်ရေသန့် ရရှိရေးနှင့် ကူညီရေး၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား မိသားစုဝင်များအား စောင့်ရှောက်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအမှုများကို ဥပဒေ အထောက်အကူပြုရေး၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အပါအဝင် လုပ်ငန်းရပ်များ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်မည်ဟု သိရသည်။
CECအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းတင်က“လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကကျနော်တို့ကနိုင်ငံရေးပါတီဗျာ။ဆိုတော့ လူထုကိုမျက်နှာမူတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်။လူတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေတဲ့ မတရားမှုတွေရပ်ပေးသင့်တာရပ်ပေးမယ်။ဦးဆောင်မှုပေးသင့်တာပေးမယ်။ကန့်ကွက်သင့်တာ ကန့်ကွက်မယ်။ဒါတွေကလူထုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တယ်။ရုံးတွေ၊ဋ္ဌာနတွေမရှိဘူးဆိုရင်လူထုထဲကိုဆင်းမှာပဲ။ လူထုတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးရှာမယ်။လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကိုက်ညီတာတွေရှိရင်လည်းရှိမယ်။ ပိုပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့လုပ်ငန်းတွေတွေ့ရင်လည်းတွေ့မယ်။ပျော့ပျောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်ရင်လည်း ဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့ကလူထုကြားထဲကိုဆင်းကြမယ်၊လုပ်ကြမယ်”ဟုမဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အစည်းအဝေးသို့နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကျခံနေသည့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ကျန်းမာရေးအရပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေ၊အတွင်းရေးမှူးဦးလွင်၊CECအဖွဲ့ဝင်ဦးလွန်းတင်တို့မှအပကျန်ရှိသည့်CECအဖွဲ့ဝင်၁၆ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
NLDရုံးများတွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ပါတီဆိုင်းဘုတ်နှင့်အလံများကိုပါတီဝင်များက ဖြုတ်သိမ်းခြင်းမပြုရန်လည်း အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ဦးဝင်းတင်က''ကျနော်တို့အနေနဲ့ရုံးဖွင့်လို့ရရင်ဖွင့်မယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအနေနဲ့ရုံးပိတ်ရမယ်ဆိုရင်၊ သော့ခတ်မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါတော့သူတို့ကသော့ခတ်လို့ရတာကိုး။ ကျနော်တို့ကရုံးမပိတ်ဘူး၊အလံဖြုတ်မချဘူး၊ဆိုင်းဘုတ်ဖြုတ်မချဘူး”ဟုပြောဆိုသည်။
လာမည့်လ၆ရက်နေ့တွင်ပါတီသက်တမ်းကုန်မည်ဖြစ်သော်လည်းဆိုင်းဘုတ်နှင့်အလံအားဖြုတ်မချရန်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူမ၏ရှေ့နေများနှင့်ယခုလ၂၄ရက်နေ့တွင်တွေ့ဆုံစဉ် သဘောထားပေးခဲ့သေးသည်။
တနိုင်ငံလုံးတွင်တိုင်း/ပြည်နယ်နှင့် မြို့နယ်ရုံးများ အပါအဝင်စုစုပေါင်း ရုံး၃ဝဝကျော်တည်ရှိရာ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် မေလ ဒီပဲယင်းဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရက အားလုံးကို ပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည့်လ ၈ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်အပြီး NLD ရုံး ၁ဝဝ ကျော် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့် ပြုခဲ့သည်။
အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက် အသေးစိတ်ကို လာမည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမည်ဟု သိရသည်။
အဝေးမှမြင်ရသည့်ရေအလျင်ကအနီးသို့ရောက်လျှင်မူ…ကွယ်ပျောက်၍သွား၏။တံလျပ်များကြောင့် နေပြည်တော်၏လမ်းမများကပဉ္စလက်ဆန်နေ၏။မရှိသည်ကိုအရှိအလားထင်မှတ်မှားနေစေ၏။ ကြိုကျဲသောသစ်ပင်တို့က…နေပြည်တော်အားအေးချမ်းသည့်အရိပ်အာဝါသအားမပေးစွမ်းနိုင်…။ ပူပြင်းသောနွေ၏လောင်မြိုက်မှုအားနေပြည်တော်သည်လူးလွန့်၍ခံနေရ၏။နီညိုသောမြေသားတို့က အပူဒဏ်ကြောင့်မွဲခြောက်ခြောက်….။
လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်ထားသဖြင့်ခန်းမဆောင်များအတွင်းအေးမြမှုအား ဖန်တီးရယူထားနိုင်သော်လည်း…မြင်ရသည့်ခန်းမအပြင်၏မြင်ကွင်းများကမူ…စိုလွင်မှုမရှိ…။ အေးမြမှုကင်းမဲ့၍… မွဲခြောက်ပူလောင်လွန်းလှ၏။ဖန်တီးရယူနိုင်မှုဟူသည်ကား… အကန့်အသတ်နှင့်…။
နွေနေ့များက … တနေ့ပြီး … တနေ့ကုန်လွန်၍နေ၏။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့် အချိန်များကတရွေ့ရွေ့နှင့်နီကပ်၍လာပြီ။မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း…။ချထားသည့်သဘောထားအတိုင်း ရပ်တည်၍ဆုံးဖြတ်မည်လား…။ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သည့်ဥပဒေအတိုင်းလျှောက်လှမ်း၍သွားမည်လား…။ ပေးထားခဲ့သည့်ရာဇသံအတိုင်းပင်စီရင်မည်လား….။
သို့တည်းမဟုတ်….။ အခြား…ရွေးလမ်းသစ်တခုအားရွေးချယ်မည်လား…။အလျှော့…အတင်း၊ အပေး…အယူများနှင့်စေ့စပ်၍ညှိနှိုင်းမည်လား….။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေလေးလေးနက်နက်တွေး၏။အပြန်ပြန်အလှန်လှန်စဉ်းစား၏။ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမူ …. ချ၍မရသေး…။
ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်း၊ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းနှင့်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်တို့ထံမှအစီအရင်ခံစာများဝင်လာ၏။ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့KIOနှင့်‘ဝ’ ပြည်သွေးစည်းညီညွှတ်ရေးပါတီUWSAတို့က….သူတို့၏ တပ်ဖွဲ့များအားနယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေးအားထပ်မံ၍ငြင်းဆိုလိုက်သည်ဟုဆို၏။
နောက်ဆုံးနေ့ရက်အားအကြိမ်ကြိမ်ရွှေ့ပေးခဲ့ပြီး၊နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအားနည်းလမ်းမျိုးစုံနှင့်ကြိုးစားခဲ့၏။မရ…။အပစ်ရပ်အဖွဲ့များကခေါင်းမာ၍နေကြ၏။ အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအတွင်းတွင်UWSAကလက်နက်ကိုင်အင်အားအကြီးမားဆုံးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်၏။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတွင်ပထဝီနိုင်ငံရေးအရလည်းUWSAကအရေးပါ၏။
ဤအတွက်ပင်….လွန်ခဲ့သည့်မတ်လ၂၅ရက်နေ့မှစ၍‘ဝ’နယ်သို့ဆန်ရိက္ခာကုန်စည်တင်ပို့မှုအား ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်ပြီး၊၃၁ရက်နေ့အားနောက်ဆုံးရက်အဖြစ်သက်မှတ်ပြီး…ပန်ဆိုင်းရှိNGO များအားလုံးနှင့်အစိုးရဝန်ထမ်းများအားလုံး၊ထွက်ခွာခဲ့ရန်နေပြည်တော်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့၏။ပြီးလျှင် … တပ်မ(၃၃)(၅၅)(၇၇)(၉၉)တို့အားUWSA၏နယ်မြေအတွင်းသို့ထပ်၍ပို့၏။တာချီလိတ်တွင်အခြေစိုက်၍ လေတပ်လှုပ်ရှားနိုင်ရေးအတွက်လည်းပြင်ဆင်၏။
တရုတ်တို့ကလည်းပန်ဆိုင်းသို့သွားပြီး ‘ဝ’တို့အားဖျောင်းဖျ၏။မရ….။UWSAကသူ၏အခြေခံရပ်ခံချက်မှ ဆုတ်၍မပေးခဲ့…။ဤတွင်KIO,SSA-N,NDAA(မိုင်းလားအဖွဲ့)တို့ကလည်း UWSA၏ သဘောထားအတိုင်းပင်မာမာခံခံနှင့်ရပ်ခံလာကြ၏။
ဧပြီလ၂၂ရက်နေ့တွင်KIOတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဗိုလ်မှူးကြီးဆင်ဝါးပြောဆိုခဲ့သည့် စကားများက… ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအား စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စေ၏၊မည်သို့မျှသည်းမခံနိုင်….။
“ဒီနယ်ခြားစောင့်တပ်ကိစ္စကိုအစိုးရကလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်လည်း မကောင်းဘူး၊ကျနော်တို့အတွက်လည်းမကောင်းဘူး။ပြည်သူအားလုံးအတွက်လည်းမကောင်းပါဘူး။ အဓိကကတော့အစိုးရရဲ့သဘောထားအပေါ်မတည်ပါတယ်။ကျနော်တို့ကတော့လက်ရှိ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့အနေအထားကိုထိခိုက်စေလိုတဲ့သဘောမရှိဘူး။ဆန္ဒလည်း မရှိဘူး…”
ပြီးလျှင်…‘ဝ’ ခေါင်းဆောင်များကလည်း …“မည်သည့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့မဆိုဝ' ပြည်နယ်အစိုးရ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ‘ဝ’နယ်ထဲဝင်ရောက်လာပါကမိမိကိုယ်မိမိကာကွယ်သည့်မူအရအသက်ရင်း ခုခံတိုက်ခိုက်သွားမည်”ဟု ပြတ်ပြတ်သားသားပင်တပ်မတော်အား စိန်ခေါ်နေ၏။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်း ‘ဝ’ခေါင်းဆောင်များက …‘ဝ’ ပြည်သူလူထုကြီးက ထောက်ခံနေသရွေ့UWSAဟာ တရားဝင်တည်ရှိနေမှဖြစ်တယ်။ဘယ်ကော်မရှင်မှာမှမှတ်ပုံတင်နေစရာ မလိုပါဘူး… ဟူ၍ ဆိုနေကြ၏။ ‘ဝ’ တို့ ရပ်တည်ချက်ကအခိုင်အမာပင်…။
ဧပြီလ၂၂ရက်နေ့၊ရက်စွဲနှင့်နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့…ဖွဲ့စည်းရေးတို့အား လက်မခံကြောင်းငြင်းဆိုသည့်စာကိုမွန်ပြည်သစ်ပါတီNMSPမှအရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သက်နိုင်ဝင်းထံသို့ ပေးပို့လာပြန်၏။
ပြီးလျှင်….UWSA,KIO,SSA-Nနှင့် NDAAအဖွဲ့များမှခေါင်းဆောင်များပန်ဆန်းတွင်တွေ့ဆုံကြပြီး စစ်ရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့ကြ၏။တဖွဲ့အားတိုက်ခိုက်လာလျှင်….ကျန်သည့်အဖွဲ့အားလုံးမှနအဖအား ပြန်၍တိုက်ခိုက်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြ၏။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့် အဖွဲ့များတွင် UWSA, KIO, SSA-N,NDAAနှင့်မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ကလက်နက်ကိုင်အင်အားအတောင့်တင်းဆုံးသောအဖွဲ့များဖြစ်၏။ အပစ်ရပ်အဖွဲ့အားလုံးရှိလက်နက်ကိုင်အင်အား၏ ၈ဝ% မျှ ရှိမည်။ မလွယ်….။
ပေးထားခဲ့သည့် ရာဇသံအတိုင်း ….နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်မကူးပြောင်းသည့်အပစ်ရပ်အဖွဲ့များအား မတရားအသင်းအဖြစ် ကြေညာပြီး …စစ်ရေးအရဆင်နွှဲမည်လား…။ဒါမှမဟုတ်….စစ်ရေးအရ ထိုးစစ်ဆင်ခြင်းကိုမပြုလုပ်သေးဘဲ…ရှိရင်းစွဲအခြေအနေအတိုင်းဆက်၍ထိန်းထားပြီး…၊ နောက်တက်လာမည့်အစိုးရနှင့်မှဆက်ဆွေးနွေးကြ…ဟူ၍အပစ်ရပ်များအား ဆက်၍အချိန်ဆွဲထားမည်လား….။
ဤသို့ဆိုလျှင်….ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်အေး၊ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်း၊ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်တို့ကမည်သို့ သဘောထားပေးကြလေမည်နည်း…။အပစ်ရပ်အဖွဲ့များနှင့်ပတ်သက်၍ဖေဖော်ဝါရီလက၊ကျိုင်းတုံတွင် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ပြောခဲ့သည်များအားပြန်၍အမှတ်ရမိ၏။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်ခက်နေ၏။၂၈ရက်နေ့တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်အားချရမည်။ ၄၈နာရီသာ ကျန်တော့၏။ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတွေး၏၊စဉ်းစား၏၊ဆုံဖြတ်ချက်ကိုကား…ချ၍မရသေး။
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။နာရေးကူညီမှုအသင်းကို၂ဝဝ၁ခုနှစ်ကတည်းကတည်ထောင်ခဲ့သူရုပ်ရှင်မင်းသား ဦးကျော်သူကိုပြည်တွင်းပြည်ပရောက်မြန်မာများကအွန်လိုင်းမှတဆင့်ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုပေး ရွေးချယ်လိုက်ကြသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံမြို့ပေါင်း၁၄မြို့မှမြန်မာမိသားစုများကမြန်မာပြည်တွင်းရှိလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် တက်ကြွစွာလုပ်ကိုင်နေသူများအားပြည်ပရောက်မြန်မာများ၏ဆန္ဒမဲများဖြင့်ဧပြီ၂၄ရက်နေ့က ရွေးချယ်ချီးမြှင့်သည့်ဆုဖြစ်သည်။
ဆုရတဲ့အပေါ် ခံစားချက် ပြောပြပေးပါ။
“ပြည်တွင်းကလူမှုရေးသမားတွေကိုပြည်ပမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကအခုလိုအသိအမှတ်ပြု အားပေးလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။ကျနော်ဆုရတဲ့အကြောင်းမူဆယ်နာရေးကူညီမှု အသင်းကဖုန်းဆက်ပြီးဝမ်းသာကြောင်းပြောလို့သိရပေမယ့်သိပ်မယုံခဲ့သေးဘူး။အိမ်ပြန်လို့အီးမေးလ် ဖွင့်ကြည့်တော့မှတကယ်ရတာကိုသိရတာ။ညနေလောက်ကျမှဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားတယ်”
“ကျနော်ကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်၊ကိုယ်တာဝန်ကျေအောင်လုပ်တာပဲ။ကိုယ့်သီလကိုယ်လုံအောင် နေပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အတွက်ချီးမြှင့်ခံရတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆုရတဲ့အတွက်ကျနော့်စိတ်ကိုလည်း အားဖြစ်စေပါတယ်။ထက်မြက်တဲ့အားဆေးတခွက်သောက်လိုက်ရသလိုပါပဲ။လူမှုရေးအလုပ်ကိုပိုပြီး ဇောက်ချပြီးလုပ်ဖို့ဖြစ်စေပါတယ်”
“အင်မတန်ကောင်းတဲ့စနစ်ပါ။ကမ္ဘာမှာလည်းဒီလိုစနစ်ကိုကျင့်သုံးတာပါ။မြန်မာပြည်တခုထဲမှာမရှိတာပါ။ ဥပမာ-ကျနော်တို့အကယ်ဒမီပေးပွဲပေါ့၊အော်စကာဆုပေးတဲ့စနစ်အတိုင်းကျင့်သုံးသင့်တယ်။အကယ်ဒမီ ပေးတဲ့အခါမှာပေးချင်တဲ့လူကိုကောက်ပေးတာပေါ့။အခုက၂၄ဦးထဲကပရိသတ်ကိုမဲပေးခိုင်းပြီးဆန်ကာတင် ၅ဦးရွေးခိုင်းတယ်။အဲဒီထဲကတဦးကိုမဲပေးရွေးတာပေါ့လေ”
“ကျနော်ဒီလူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကျနော့်ဇနီးရွှေဇီးကွက်ကလုပ်ချင်လို့ရုပ်ရှင်မင်းသားဘဝက ဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတာ။ကျနော်ဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးတွေလုပ်ဖြစ်လာအောင်ကျနော့်သား ပြည်သိမ်းကျော်နဲ့ကျနော့်သမီးမြင့်မိုရ်ကျော်သူတို့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားလာပြီးလုပ်ဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့် သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျနော့်ကိုမဲပေးရွေးချယ်ကြတဲ့ပြည်သူတွေ၊ဆုပေးနိုင်အောင်စီစဉ်ကြတဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာလူမျိုးတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
“၇ရက်သားသမီးဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးအခမဲ့ကူညီလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့နာရေးကူညီမှုအသင်း။ ဆရာတော်သံဃာတော်တွေပျံလွန်တော်မူရင်လည်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။နောက်ပြီးဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့၇ရက် သားသမီးတွေဆေးဝါးကုသနိုင်တဲ့သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းဖွင့်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးကလေးတွေအတွက် နွေရာသီအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေလည်းဖွင့်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးလူငယ်တွေဘဝတက်လမ်းအတွက် စာပေတွေလေ့လာနိုင်ဖို့သုခအလင်းစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ထားပါတယ်”
ကျော်ကြားတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသားအဖြစ်ကနေ လူမှုရေးလုပ်ငန်းဘက် လှည့်လာတာလဲ။
“ကျနော်ရုပ်ရှင်မင်းသားလုပ်နေစဉ်မှာလူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အတွက်စိတ်ညစ်လာတယ်။အဲဒီအခါမှာ ဘဘဦးသုခဆီသွားပြီးစိတ်ညစ်တဲ့အကြောင်းသွားပြောတယ်။အဲဒိအခါမှာဘဘက'မောင်ကျော်သူ .. မင်းကို ဘဘမေးချင်တယ်။ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်နာမည်သိလားဆိုတော့ကျနော်ကမသိပါဘူး။အီတလီ ဝန်ကြီချုပ်နာမည်သိလားဆိုတော့မသိပါဘူ။ ဒါဆိုချာလီချက်ပလင်ကိုသိလားဆိုတော့သိတယ်ဆိုတော့ .. ဒါ အဖြေပဲ'တဲ့။'နိုင်ငံကျော်သရုပ်ဆောင်တယောက်ကအများအတွက်အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ပိုပြီး လူသိတယ်။အောင်မြင်တယ်'လို့ပြောခဲ့တယ်။အဲဒီကတည်းကအနုပညာရှင်အဖြစ်အောင်မြင်နေတဲ့ ကျနော့်နာမည်ကိုခုတုံးလုပ်ပြီးလူမှုရေးလုပ်ငန်းကိုဇောက်ချလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်”
“ကျနော့်မိဘတွေကရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်။ဒါရိုက်တာတွေနဲ့လည်းသိနေတော့အိမ်ထောင်ကျပြီးနောက် 'ချစ်ကြိုးလေးတမျှင်'ကားနဲ့အောင်မြင်လာတာ။ကျနော်ရုပ်ရှင်ရိုက်လာတာနှစ်အစိတ်လောက်ကြာတော့ ငြီးငွေ့လာတယ်။ကျနော့်သားသမီးတွေ၎-၅တန်းလောက်မှာအင်းစိန်ကအောင်ဆန်းတောရ ဆရာတော်ဆီမှာတရားစခန်းသွားနာပြီး၊ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကငရဲကျလားလို့မေးတာကို ကြားပြီးတုန်လှုပ်သွားပြီးဘာသာရေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်တွေဖတ်၊ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဆုံးမမှုတွေကြောင့်၊နောက်ပြီးဘဘဦးသုခရဲ့ညွှန်ပြမှုတွေကြောင့်လူမှုရေးထဲကိုဝင်လာတာ”
“အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ကျနော်တို့လူမှုရေးအလုပ်ကိုဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းမလုပ်ရဘူး၊ ကျနော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကကျနော်တို့ကိုအငြိအစွန်းတွေလုပ်နေတာလို့ မြင်ကြတယ်။ပြောရရင်တော့အများကြီးပါပဲ။အနှောင့်အယှက်ပေးတာတွေ၊တရားစွဲမယ့်အဆင့် ထောင်ချခံရမယ့်အဆင့်တွေတောင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကျနော်တို့ကကြံ့ကြံ့ခံပြီးမှန်တဲ့အတိုင်း လုပ်တဲ့အတွက်အခုအချိန်ထိရှိနေတာပါ။၂ဝဝ၁ခုနှစ်ကတည်းကလူမှုရေးကိုလုပ်လာတဲ့အခါအလှူငွေထဲက ပိုက်ဆံတပြားမှမယူပါဘူး။ကျနော်တို့ကနာရေးအသင်းရှိတဲ့နေရာကိုကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ်သွားတယ်။ ရောက်ရင်အလုပ်လုပ်ပြီးကိုယ်စရိတ်နဲ့ကိုယ်ထမင်းဝယ်စားတာပါ။လခစားဝန်ထမ်းတွေလောက်ပဲ လစာပေးပါတယ်”
“ကျနော်တို့စစလုပ်တုန်းကလူ၂ဝ၊အစိတ်လောက်နဲ့စခဲ့တာ။အခုဆိုရင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအပါအဝင် အယောက်၂ဝဝကျော်ရှိသွားပြီ။နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကတစီးနှစ်စီးကနေအခု၁၇စီး၊၁၈စီး ဖြစ်နေပါပြီ။အသင်းကလည်းအခုဆိုရင်စနစ်တကျနဲ့လုပ်နေပါပြီ။မော်တော်ယာဉ်ဌာန၊ဆေးဌာနစသဖြင့် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်”
“ကျနော်တို့ကရန်ပုံငွေမရှာပါဘူး။ကျနော်တို့ကအလှူရှင်တွေကလာလှူတဲ့ငွေနဲ့ပဲသုံးတာပါ။ကျနော်တို့NGO ကနိုင်ငံခြားမှာလုပ်တဲ့NGOလိုProposalတင်ပြီးလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ဘယ်မှာProposalမတင်ပါဘဲလာလှူတဲ့ လူတွေရဲ့ငွေနဲ့ပဲစနစ်တကျလုပ်တာပါ”
“စလုပ်တုန်းကပါတဲ့လူတွေကပဲငွေကြေးစိုက်ထုတ်မတည်ပြီး၊နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ဝယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ။နောက်ပိုင်း ပြည်တွင်းပြည်ပကအလှူရှင်တွေကလှူတဲ့ငွေနဲ့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပကအလှူတွေကမျှမျှတတပဲ ရှိပါတယ်။ပြည်ပကတော့တနှစ်တခါစုပေါင်းလှူတာတို့၊ဓာတ်မှန်ခန်းဆောက်မယ်ဆိုရင်စုပေါင်းပြီး လာလှူတာတို့ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးသင်္ဘောသားတွေပြန်တက်လာတဲ့အခါလာလှူကြတာတို့ရှိပါတယ်”
“နာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ဆေးခန်းအတွက်ပဲတလကိုသိန်း၃ဝဝကျော်ရှိပါတယ်။တနှစ်ကိုသိန်း၃၆ဝဝကျော် ရှိပါတယ်။လုံလောက်မှုရှိပါတယ်။မျှတအောင်ကုန်သင့်ကုန်ထိုက်တာကိုပဲအကုန်ခံတယ်။မလိုအပ်တဲ့ နေရာမှာအကုန်မခံပါဘူး။အခုချိန်ထိတော့အချိုးညီပါတယ်”
“အဆောက်အဦးတွေပြန်ဆောက်နေတာရှိတယ်။ဓာတ်မှန်ခန်းကဇွန်လဆိုရင်ဖွင့်နိုင်ပြီ။နာရေးရုံးခန်း မရှိသေးဘူး။ဆေးခန်းထဲမှာအခန်းတခန်းယူပြီးဖွင့်နေရတယ်။လူနာနားနေဆောင်ပြန်ဆောက်ရမယ်။ ကားဂိုဒေါင်ရုံဆောက်ဖို့ရှိမယ်။မီးစက်ဝယ်ရမယ်။အဝီစိရေတွင်းတူးရမယ်။အဲဒါတွေအတွက် လိုအပ်နေပါသေးတယ်”
ပိတ်ပင်ခံထားရတဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းပြန်လုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရော … ။
“ကျနော့်ကို၂ဝဝ၇ခုနှစ်ကတည်းကပိတ်ထားတာ၊သရုပ်ဆောင်ခွင့်စာရေးခွင့်ဘာမှလုပ်ခွင့်မရပါဘူး။ ပြန်လုပ်ခွင့်ရရင်တောင်မလုပ်တော့ပါဘူး။အဲဒီအလုပ်ကိုလည်းမနှစ်မျို့တော့ဘူး။အများနဲ့လုပ်ရတဲ့ကိစ္စ၊ ကုသိုလ်မရတာများတယ်။ကုသိုလ်ရတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တော့မယ်။အခြေအနေပေးလာခဲ့ရင် သမိုင်းအဖြစ်မှန်တွေကိုဒါရိုက်တာအဖြစ်ရိုက်ကူးဖြစ်မယ်။ပရဟိတအလုပ်ကိုပဲဇောက်ချလုပ်တော့မယ်”
“ဟုတ်တယ်။ကျနော်လုပ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကျနော့်မိတ်ဆွေအင်္ဂလန်ကတယောက်၊စင်္ကာပူက တယောက်ရယ်လုပ်ပေးတာ။ကျနော်လည်းအဲဒီမှာကျနော့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုရေးပြီးတင်တယ်။fan ပရိသတ်တသောင်းကျော်လာတဲ့အခါမှာဘယ်သူကသွားပြီးFacebookကုမ္ပဏီကိုပြောလိုက်တယ်မသိဘူး။ ပိတ်လိုက်တယ်။ကျနော်ရေးချင်တဲ့ဆောင်းပါးတွေရေးမရတော့ဘူး။commentပေးလို့မရတော့ဘူး။ အခုတော့commentပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျနော်ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာအသစ်တွေတော့တင်လို့ မရသေးဘူး။အခမဲ့နာရေးကိစ္စကူညီနေတဲ့၊အခမဲ့ဆေးကုသပေးနေတဲ့လူတွေကိုဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းပါဘူး။မလုပ်သင့်ပါဘူး”
“အများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။Facebookကပဲအလှူငွေတွေတက်လာတာပါ။ကမ္ဘာအနှံ့မှာရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့မြန်မာတွေကFacebookစာမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးနာရေးကူညီမှု အသင်းရဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာကိုသိကြပြီးလှူကြတာ။ထို့နည်တူစွာပြည်သူဂုဏ်ရည်ဆုကလည်း Facebookကြောင့်လူသိများလာတာလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျနော့်ကိုစာမျက်နှာလုပ်ပေးတဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ စင်္ကာပူကမိတ်ဆွေတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
“တခြားမြို့ကအသင်းတွေကကျနော်တို့နဲ့ပတ်သက်မှုတော့မရှိဘူး။သက်ဆိုင်ရာမြို့တွေမှကျနော်တို့ကို အားကျပြီးဖွဲ့တာတွေရှိပါတယ်။အသင်းဖွင့်ပွဲတွေမှာကျနော့်ကိုဖိတ်လို့၂ဝဝ၇မတိုင်ခင်ကမြို့ပေါင်း၅ဝ ကျော်မှာဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။၂ဝဝ၇နောက်ပိုင်းတော့ခရီးသွားခွင့်အခက်အခဲရှိလို့မသွားဖြစ်တော့ဘူး။ ညဘက်တွေဆိုရင်အယူသီးတာတွေပပျောက်အောင်ဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပါတယ်။ကျနော်ကိုယ်တိုင် ကားမောင်းပြီးအလောင်းတွေလိုက်ပို့ပေးပါတယ်”
''ကျနော်ဒီအလုပ်ကိုတသက်လုံးလုပ်သွားမှာပါ။ဒီအလုပ်က၃၁ဘုံမှာဘယ်ဘုံမှာမှလုပ်လို့မရဘဲလူ့ဘုံမှာမှ လုပ်လို့ရတဲ့အလုပ်ပါ။အဲဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုဇောက်ချလုပ်သွားမှာပါ။ကျနော်တို့နာရေးအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အယူသီးမှုတွေကိုအများကြီးကြုံရတယ်။အဲဒါတွေကိုချွတ်ပေးကြပါ။လမ်းထဲကိုနိဗ္ဗာန်ယာဉ်ဝင်ရင် ဒီဘက်ထိပ်ကမဝင်ရဘူး၊ဟိုဘက်ထိပ်ကမဝင်ရဘူး။မင်္ဂလာမရှိဘူးလို့ယူဆကြတယ်။တချို့က လမ်းခင်းထားတာအသစ်မို့လို့မဝင်ခိုင်းတာတို့ရှိတယ်။ဒါတွေကမလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာတွေပါ။ဒါဆိုရင် အဲဒီလမ်းကလူတွေရောမသေကြတော့ဘူးလား။သေတဲ့လူတွေဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းသွားနိုင်အောင် ကူညီပေးကြပါ။တိရစ္ဆာန်မသာတွေကျတော့ခုတ်ထစ်ပြီးပါးစပ်ထဲထည့်ကြတယ်။လူမသာတွေကျတော့ ရပ်ကွက်ထဲ၊လမ်းထဲအဝင်မခံဘူးဆိုတာမျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်''
သင်္ကြန် ဗုံးခွဲသူ ဖမ်းမိရေး ဆုငွေ ထုတ်ပြီ
တအောင်း (ပလောင်) ဒေသရှိ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားမှုအေ...
အလင်းမဲ့ဘဝအမည်ရှိ ပညာရေးစစ်တမ်း အစီရင်ခံစာထုတ်ဝေ
စစ်အစိုးရစွပ်စွဲမှုကို ကန့်ကွက်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆုအတွက် ဆန်ကာတင်ပုဂ္ဂိုလ်များ ဝမ်းမြေ...
မြစ်ဆုံ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းနှင့် KIO...
ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေးပါတီ စည်းရုံးရေး အရှိန်တိုး...
ဗုံးခွဲတရားခံများအား သတင်းပေးနိုင်က ဆုငွေချီးမြှင်...
သွေးလှူရှင်များကို ဝါဒဖြန့်ရန် ဖိအားပေး
လောင်းကစားလုပ်ငန်းကိုပြန်လုပ်ရန် ရဲအာဏာပိုင်များ တ...
ဗုံးကွဲမှုတွင် တိုင်းစစ်ဒေသမှူး ပြင်းထန်စွာ ဒဏ်ရာရ
ရှမ်းနှင့် မကွေးတွင် လေပြင်းတိုက်၊ ပျက်စီးမှုများြ...
“ မျိုးစေ့ ”
ပြည်တွင်း ဆန်လက်ကျန် စစ်အစိုးရ ကောက်ယူ
ကလေးမြို့မီး အိမ် ၂၃ လုံး လောင်၊ ၁၂ဝ ကျော် အိုးအိမ...
ကြံ့ဖွံ့ထံမှ ငွေမယူဟု ခေတ်သစ် ပြည်သူ့ပါတီ ငြင်းဆို...
မန္တလေးသား စစ်စစ်ကြီးပါဗျာ” ပြဇာတ် လူကြိုက်များ
သန်လျင်ရင်ခွဲရုံက အလောင်းတွေကို ဘယ်သူဖျက်ဆီးနေလဲ
အာဆီယံခေါင်းဆောင်များ မြန်မာကို အသက်ရှူပေါက် ပေးလို...
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ခုံရုံးဖွဲ့စစ်ဆေးရန် ချက် ထောက...